မျောလွင့်တိမ် တို့ နားခိုရာ....: July 2012
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က မြန်မာပြည်က ကျွန်တော့်အစ်မ ဖုံးဆက်တယ် မနှင်းဆီ....။အစ်မက နေ့တိုင်းနီးပါး
လောက်ဖုံးဆက်နေကြပါ။ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါဆက်တဲ့အကြောင်းက ထူးတယ်မနှင်းဆီ...။ကျွန်တော်လိုချင်
တဲ့ ခြံကွက်လေးတစ်ကွက်ရှာနေတာ တွေ့ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဆက်တာ မနှင်းဆီရဲ့....။ဟုတ်တယ်........
မနှင်းဆီရဲ့....၊ကျွန်တော် ဒီတစ်ခေါက်မြန်မာပြည်ပြန်ကတည်းက ခြံလေးတစ်ခြံဝယ်မလို့ရှာနေတာရယ်...။
ခြံလား....ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာ ပေါတာပေါ့လေ...၊သို့ပေမယ့် ခြံသာပေါ၊ဈေးမပေါဘူးမနှင်းဆီရဲ့...။
မနှင်းဆီတို့ မြို့တော်ကြီးက လော်ပန်တွေက သူတို့ပိုက်ဆံတွေထားစရာမရှိတိုင်း ကျွန်တော်တို့တော
ဘက်ကို ဆင်း ဆင်းလာကြပြီး မြေလွတ်မြေရိုင်းတွေကို ဈေးတစ်ချက်မဆစ်ပဲ ဝယ်ကြလေတော့ ဈေးတွေ
က မယုံနိုင်လောက်အောင် မြင့်ကုန်ကြတယ် မနှင်းဆီရယ်....။ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့လို သာမန်လူတန်း
စားတွေအတွက် နေရာကောင်းကောင်းက ခြံမြေကွက်ဆိုတာ အနားတောင်မသီနိုင်တော့ဘူးလေ....။
ဒါတောင် ကျွန်တော်က ကြေးများတတ်တဲ့လူမဟုတ်ပါဘူး....၊ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ ခြံကွက်ဆိုတာက
အရေးကြီးတာက ရေထွက်လွယ်ဖို့နဲ့ စိုက်ပျိုးလို့ရမယ်၊ဈေးသင့်မယ်ဆို ကျေနပ်ပြီးသား မနှင်းဆီရဲ့...။
အဲ့ဒီလိုမြေကွက်မျိုးကိုတောင် ခြေတိုအောင်ရှာနေရတယ်မနှင်းဆီရယ်....၊အဓိက ကတော့ ပိုက်ဆံပေါ့၊
ထိုက်သင့်တဲ့ဈေးဆို ကိုယ်တတ်နိုင်ရင် ပေးဖို့ဝန်တာမလေးပါဘူးလေ...၊ဒါပေမယ့်မနှင်းဆီရေ.....
ခုဏက ပြောသလိုပဲ...ဈေးတွေက မဖြစ်သင့်တဲ့ဈေးတွေ ခေါ်ကြလေရဲ့....။
ရောင်းသူတွေဘက်ကို နားလည်ပေးနိုင်ပေမယ့် ဝယ်သူဘက်ကိုတော့ ကျွန်တော် နားလည်မပေးနိုင်ဘူး
မနှင်းဆီရယ်...။ကိုယ့်ရှိလို့ကိုယ်ဝယ်တာ ဘာဖြစ်လဲ လို့ပြောမယ်ဆို ပြောနိုင်ပါရဲ့...၊ငွေပေါတိုင်း မလိုအပ်
ပဲ ဝယ်ကြလေတော့ ကျွန်တော်တို့လို လိုအပ်လို့ တကယ်အသုံးချမယ့်သူတွေအတွက် အခက်အခဲတွေ့
စေတယ်ဗျာ...။တစ်ခါတစ်ခါကျ ပစ္စည်းမဲ့ဒေါသ ပဲပြောပြော အဲဒီ လူချမ်းသာတွေကို ဒေါသထွက်တယ်
ခုတော့ ကျွန်တော့်အစ်မကျေးဇူးကြောင့် ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့ ငွေကြေးပမာဏနဲ့လက်လှမ်းမှီတဲ့ ခြံ
ထားလိုက်ပါတော့၊ဈေးလည်း သိပ်ဆစ်မနေပါနဲ့လို့ ပြောထားလိုက်တယ် မနှင်းဆီရေ....။အဲဒီခြံလေး
အကြောင်းလား...ပြောပြမှာပေါ့မနှင်းဆီ....။ကျွန်တော်တို့မြို့နဲ့ ၈မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ ရွှာကြီးတစ်ရွှာနား
က အတွင်းဘက်ချောင်ကျကျ ခြံလေးပါပဲဗျာ...၊ငါးဧကလောက်တော့ကျယ်သတဲ့....။မြေလွတ်မြေရိုင်းတဲ့၊
မြေလွတ်မြေရိုင်းဆိုတော့ ခြုံတွေဘာတွေတော့ ရှိသပေါ့လေ...၊ဘေးကျခြံတွေကလည်း သပြေတွေဘာ
တွေ စိုက်ပျိုးကြတဲ့ ဥယျဉ်ခြံတွေပဲတဲ့....။လျှပ်စစ်မီးတော့ မရှိဘူးတဲ့လေ...။ရေလည်း လွယ်လွယ်ကူကူ
ထွက်သတဲ့....။လမ်းကအကောင်းကြီးမဟုတ်ပေမယ့် ရွှာလမ်းဆိုတော့ သင့်တင့်သပေါ့ မနှင်းဆီ...။
အဲဒီခြံလေးအကြောင်း ခင်မင်ရတဲ့အစ်မတစ်ယောက်ကိုပြောပြတော့ သူကပြောတယ်....၊မြို့ကြီးပြကြီး
မှာမပျော်တော့လို့ တောမှာသွားနေတော့မပေါ့လေ.....ဟုတ်လား......တဲ့.....။တကယ်ဆို မြို့ပြမှာ....
ကျွန်တော်ပျော်ပါတယ်မနှင်းဆီ.....၊မြို့ပြမှာ ပျော်လည်း ပျော်သလို၊မောလည်းမောတယ် မနှင်းဆီရဲ့...။
ကျွန်တော်မြို့ပြရဲ့ မာယာမှော်ရုံတောမှာ ပျော်မောမိတယ်ဆိုပေမယ့် ဒါဟာ ခဏတာ နားခိုရုံသက်သက်၊
တစ်ဘဝတာအတွက်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီးသားပါ....။ကျွန်တော့်အတွက်
တစ်သက်တာ နားခိုရာဟာ တောမှာပဲဆိုတာ ကျွန်တော် နားလည်ပါတယ်မနှင်းဆီရယ်...။ပြီးတော့
ကျွန်တော့်မိအိုဘအိုတွေနဲ့ အနီးဆုံးမှာနေပြီး သူတို့ဘဝနေဝင်ချိန်ကို အကောင်းဆုံးနဲ့ သက်တောင့်
သက်သာအဖြစ်ဆုံး ဖြစ်အောင် ကျွန်တော်ကူညီပေးချင်သေးတယ်ဗျာ...။မိဘနဲ့သားသမီးကြားမှာ
ကျွန်တော်သိတာက သံယောဇဉ်နဲ့ချစ်ခြင်းတရားပဲဗျာ...၊သူတို့ ကျွန်တော့်ကိုချစ်သလို၊ကျွန်တော်သူ
တို့ကိုချစ်တယ်မနှင်းဆီ...၊ကျွန်တော့်မှာ အဲ့ဒီချစ်ခြင်းတွေနဲ့ သံယောဇဉ်တွေအကြောင်းပဲပြောစရာရှိ
ခြံလေးတစ်ခြံဝယ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော့်ထုံးစံ စိတ်ကူးတွေယဉ်လို့ပေါ့....၊ကျွန်တော့်ခြံလေးရဲ့
အရှေ့ဘက်ကျကျမှာ သုံးပင်နှစ်ခန်း အိမ်လေးတစ်အိမ်ဆောက်မယ်မနှင်းဆီ...။အိမ်ရဲ့နောက်ဘက်တစ်
ဝက်ကိုပဲ ကြမ်းခင်းထားမယ်....၊အရှေ့ဘက်ခြမ်းကို တော့ သမံသလင်းလေးပဲခင်းထားမယ်၊အနောက်
ကျွန်တော့်အိပ်ယာပေါ့....။အရှေ့ဘက်တစ်ဝက်က ဧည့်ခန်းသဘောထားပြီး၊တစ်ဝက်ကတော့ မီးဖိုချောင်
တာဝေလာဝေးပေါ့ဗျာ....။သီချင်းနားထောင်ဖို့ ဒီဗီဒီစက်လေးနဲ့ ဆောင်းဘောက်သေးသေးလေးတစ်စုံ
တော့ရှိလိမ့်မယ်၊ကွန်ပြူတာတွေ၊အိုင်ပက်တွေဘာတွေဆိုတာ ကျွန်တော့်အိမ်လေးနဲ့ လာလားမှမပက်
ဖွင့်ဖို့ နေရောင်ချည်သုံးဆိုလာစနစ်လေးတစ်ခုတပ်ထားမယ်....၊ချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့အတွက် ဓာတ်ငွေ့သုံး
မီးဖိုတစ်ခုရှိမယ်...၊ဒါတွေဟာ ခေတ်ပေါ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင် ဒါတွေအကုန်ပဲမနှင်းဆီရဲ့....၊ဒါတောင်
တွေးတာမဟုတ်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သလောက် ကမ္ဘာမြေကို ထိန်းသိမ်းသင့်တယ်မဟုတ်
ဘူးလားဗျာ...။ကျွန်တော့်သဘောအရတော့ မီးသွေးမီး၊ထင်းမီးနဲ့ပဲ ချက်ပြုတ်ချင်ပေမယ့် ထင်း၊မီးသွေး
ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ စောင့်ရှောက်သင့်တဲ့ သစ်ပင်တွေပဲလေဗျာ....နော့....။လျှပ်စစ်မီးမရှိတဲ့နေရာမှာ
ကျွန်တော့်အိမ်လေးနဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ ဝါးတဲလေးတစ်လုံးလည်းထိုးထားမယ်မနှင်းဆီ...၊ဘေးအကာအရံ
တွေဘာမှမရှိတဲ့ မြေစိုက်ဝါးတဲလေးပေါ့...၊တဲလေးမှာ ဝါးစားပွဲလေးတစ်လုံးနဲ့ ဝါးထိုင်ခုံလေးတွေရှိမယ်။
အဲဒီ တဲလေးထဲမှာ ကျွန်တော်ရယ်.... ကျွန်တော်ခင်မင်ရတဲ့သူငယ်ချင်းတွေရယ်နဲ့အတူဝိုင်းဖွဲ့လို့ စကား
တွေ အများကြီးပြောကြမယ်မနှင်းဆီ...၊အခါးရည်လေးဘာလေးလည်း တစ်ခါတစ်ရံ ဝိုင်းဖြစ်ကြမပေါ့လေ :)
အိမ်နောက်ဘက်မှာတော့ အဆင်ပြေရင် ရေကန်လေးတစ်ကန်လည်းတူးလိုက်ချင်သေးတယ်...၊ဒါကလည်း
ငွေပိုငွေလျှံလေးရှိမှပါလေ....။ပေနှစ်ဆယ်ပတ်လည် ရေကူးကန်လေးပေါ့....။ကျွန်တော်က ရေစိမ်ရတာ
ခြံထဲမှာလား.....၊သစ်ပင်တွေစိုက်မပေါ့ မနှင်းဆီရယ်....၊ဘာပင်တွေစိုက်မလဲဆိုရင် သုံးဧကလောက်ကို
နှစ်ရှည်ပင်ဖြစ်တဲ့ သစ်မွှေးပင်တွေစိုက်မယ်မနှင်းဆီ....။သုံးဧကဆိုတာ ဘာမှမကျယ်လေတော့ ရာဘာလို
ဆီအုန်းလိုသစ်ပင်မျိုးစိုက်ရင် ဆင့်ပါးစပ်နှမ်းပက်သလိုဖြစ်သွားမယ်လေ...၊သစ်မွှေးပင်က အပင်နဲနဲပေမယ့်
ဝင်ငွေတော့ကောင်းတယ်.....တဲ့....။ကျန်တဲ့ မြေတွေမှာ စားပင်သီးပင်တွေစိုက်မယ်လေ....။သင်္ဘောပင်၊
ပြီးတော့ သစ်ခွစင်လေးတစ်စင်လည်းဆောက်မယ်၊စံပယ်တို့၊ရွှေပန်းငွေပန်းတို့လို ပန်းပင်လေးတွေလည်း
လေးတွေနဲ့ အလှသက်သက်စိုက်ထားမယ်လေ....။ခြံပတ်ပတ်လည်မှာတော့ ငှက်ပျောပင်တွေစိုက်မယ်
ခြံလေးကိုတော့ နာမည်ဘယ်လိုပေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတာ စဉ်းစားနေဆဲပဲဗျ...၊လွယ်လွယ်ကူကူ.......
မျောလွင့်တိမ်တို့နားခိုရာ လို့ပဲပေးလိုက်ရကောင်းမလာမသိဘူးနော်....၊ဒါမှမဟုတ် ဆွေလှိုင်ဦးရဲ့ ဝတ္ထု
တစ်ပုဒ်ထဲကလို ရောရုဝ လို့ပေးလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်ရဲ့....:)))။မနှင်းဆီလည်း နာမည်လှလှလေး
ဘတ်ဆဲလားစာရေးဆရာမတွေပေးသလို မိုးမြင့်ထိပ်ခေါင်ထွဋ်တင်နောင် တွေဘာတွေတော့မလုပ်ကြေး
သွားရလာရလွယ်ကူဖို့ ဆိုင်ကယ်အစုတ်လေးတစ်စီးတော့ ဝယ်ရမယ်ဗျ...။တရုတ်ဆိုင်ကယ်တွေတော့
တစ်စီးလည်းဝယ်ရမယ်ဗျာ...၊ဒါမှ မလိုအပ်ပဲ စွမ်းအင်တွေဖြုန်းတီးသလို မဖြစ်အောင်ပေါ့နော့...။ပြီးတော့
အဖော်အဖြစ် ခွေးလေးတစ်စုံတော့ မွေးထားရမယ်...၊ကျွန်တော်က ခွေးချစ်သူကိုး.....။တစ်ခြားအဖော်
ကံအကြောင်းဆိုတာ ဘယ်သူမှ တပ်အပ်မပြောနိုင်တဲ့အရာဆိုတော့ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာရင်တော့
လည်း.......:P။ဆိုတော့ စကားကို အကုန်မပြောတာ ကောင်းလိမ့်မယ်ထင်ရဲ့....:)))
မွေးဝမ်းကျောင်းပြုရတာက စိတ်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်ဗျာ...နော့....။တစ်စုံတစ်ရာကို လက်တွေ့အကောင်
အထည်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာ စိတ်ကူးခြင်းက အစပြုကြရတယ်လို့ဆိုကြလေရဲ့...။လက်ရှိအချိန်မှာ ဒါတွေ
က ကျွန်တော့်စိတ်ကူးသက်သက်တွေပေါ့ မနှင်းဆီ....။ဒါပေမယ့် တစ်ချိန်မှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်
လည်း ကြုံတွေ့လာမှာပါလေ...၊အကျိုးနဲ့အကြောင်း တိုက်ဆိုင်လာတဲ့တစ်နေ့မှာ ကျွန်တော့်စိတ်ကူး
အိမ်မက်တွေ တကယ်ဖြစ်လာမှာပါလေ....။အဲဒီတစ်နေ့မှာ ကျွန်တော့်ခြံလေးနဲ့ အိမ်လေးဆီကို အခြား
ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေ၊သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ မနှင်းဆီလာလည်ဖို့ ခုကတည်းက ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်
ဗျာ......။တောရွှာလေးက ဘာဇိမ်ခံစရာမှမရှိတဲ့ အိမ်လေးဆီမှာ လွတ်လပ်၊ပျော်ရွင်၊စိတ်ချမ်းသာခြင်းတွေ
တော့ ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ အာမခံလိုက်ပါတယ်မနှင်းဆီ....။
Posted by ညိမ်းနိုင် at 7/29/2012 17 comments Links to this post
နင့်အသက်ငါ့ပေးဆရာကြီးညိမ်းနိုင် နှင့် ကုမ္မာရီဂိုဏ်း အရှုပ်တော်ပုံ ( ၃ )
နောက်တစ်နေ့နံနက်စောစောတွင် ကျွန်ုပ်တို့လည်း အငြိမ့်ထောင်ဆရာကိုရင်သာပျော့အားခေါ်ငင်ပြီးလျှင်
ခရမ်းသုံးခွ ဘက်သို့ထွက်ခဲ့ကြလေတော့သည်။ခရမ်းမြို့နှင့်မလှမ်းမကမ်းရှိ ဘလောက် ဟုအမည်ရသည့်
ရွှာကြီးသို့ရောက်ချိန်တွင် နေ့လည်၂နာရီခန့်ရှိပြီဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့လည်း ရွှာလယ်လမ်းမမှမဝင်ပဲ ရွှာ
နောက်ဘက်မှ ပတ်ပြီးလျှင် ရွှာတောင်ဖျားရှိကိုရင်သာပျော့မယား မယ်ဒန်ကိုး၏ဂျီးဒေါ်ကြီးအိမ်ဘက်သို့
လျှောက်လာခဲ့ကြလေသည်။ နှစ်ထပ်ပျဉ်ထောင်အိမ်ကြီးမှာ ရေနံဂျီးများ ဝနေအောင်သုတ်ထားပြီးလျှင်
ကျွန်ုပ်တို့လည်း ခြံအနောက်ဘက်မှ ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးနှင့် အသာချွတ်နင်းဝင်လာခဲ့၏။ရွှာအိမ်တို့ထုံးစံ
ဂုတ်ကျား၊အောင်နက် အစရှိသော သုနက္ခတို့နှင့် ပက်ပင်းမတိုးသည်မှာ ကံကောင်းလှပေသည်တည့်....။
အိမ်အနောက်ဘက်ထရံပေါက်မှ ခေါင်းလေးလုံးဆိုင်၍ အသာချောင်းကြည့်လိုက်သည်ရှိသော် အမျိုးသမီး
သုံးဦးသည် ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် တန်းစီထိုင်နေပြီးလျှင် တစ်ဦးခေါင်းမှ သန်းအား တစ်ဦးမှ သည်းကြီးမဲကြီးရှာ
ဖွေပေးနေကြပြီးသကာလ....ပါးစပ်မှလည်း တစ်တွတ်တွတ်နှင့် ကရားရေလွှတ်သည့်အလား တစ်စုံတစ်ရာ
ကျွန်ုပ်လည်း ကျွန်ုပ်၏အပေါင်းအပါသုံးဦးအား အသာလက်တို့၍ ခြံထောင့်သစ်ပင်အောက်ဆီသို့ခေါ်လာ
ကျွန်ုပ်။ ။ဒီမှာဗျ...ဒီအခြေအနေဟာသိပ်တော့မရိုးသားဘူး....၊သင်းတို့ အစီအရင်တစ်ခုခုများလုပ်နေ
ငံပြာရည်ပုလင်းမျှစ်မောင်။ ။အစီအရင်..ဟုတ်လား......ကျွန်တော်တွေ့တာတော့ သန်းတုတ်ရင်းအတင်း
ကျွန်ုပ်။ ။မင်းတို့ခေတ်ကာလ ကလေးတွေအဲ့သာခက်တာပေါ့....၊လောကီပညာဆိုတာ ဆန်းကျယ်သလှ
သကွယ့်....၊မသိအသာနေစမ်းဘာ....၊ဒီမှာ ကိုအွတ်ထောင်...ခင်ဗျားတို့မှာ သေနတ်တွေပါကြရဲ့မဟုတ်
ဆားပုလင်းအွတ်ထောင်။ ။အဲ့သာမှခက်တာပဲ၊ကျုပ်တို့လည်း သာမန်အငြိမ့်မင်းသမီးလေးတွေကို စုံစမ်း
ဖို့သက်သက်ဆိုတော့ ဘာသေနတ် မှ ပါမလာဘူးဗျ.....။
ကျွန်ုပ်တို့ တီးတိုးပြောနေသည်ကို နားစွန်နာဖျားကြားသွားသော ကိုရင်သာပျော့မှ ဤသို့ဝင်ပြောလိုက်
လေလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သုံးဦးသားလည်း ခေါင်းနားပန်းကြီးသွားရလေ၏။ဘယ်နှယ် သာမာန်အငြိမ့်ထောင်
ဆရာတစ်ဦး၌ သေနတ်ဆောင်ထားရပါသနည်း....။ကိုရင်သာပျော့သည် ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့် သူ့လွယ်အိပ်
ထဲလက်နှိုက်လိုက်လေလျှင် ကျွန်ုပ်တို့တို့လည်း သတိကြီးစွာထား၍ကြည့်လိုက်သည်ရှိသော်......
ကိုရင်သာပျော့။ ။ဟောဒီမှာ....မရမ်းသီးသနပ်ဗျ....၊ကျွန်ုပ်မိန်းမက မရမ်းသီးသနပ်ဆိုသိပ်ကြိက်တာ
ကလား.....၊သူကြိုက်တာလေးနဲ့ချော့ဖို့ ည ကတည်းကဝယ်ထားတာ....
ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့လေးဦးသား အိမ်ဘေးမှပတ်၍ အနှီးမိန်းမသုံးဦးထံသို့ ချဉ်းကပ်ခဲ့ကြလေ၏
ဆားပုလင်းအွတ်ထောင်။ ။ကဲ..အမိတို့......တစ်ယောက်မှမလှုပ်နဲ့...ကျုပ်တို့က အင်းစိန်စီအိုင်ဒီက
ကိုရင်သာပျော့။ ။အေးကွယ်......ကို မင်းကို လွမ်းလွန်းလို့ လာခေါ်တာပဲ...၊ဒီဆရာတွေကလည်း မင်း
မယ်ဒန်ကိုး။ ။မေးစရာရှိလို့ ဟုတ်လား.....အံမယ်လေးတော်....မေးစရာရှိတာများ...အိမ်ရှေ့က ဝင်လာ
ပြီးမေးလည်းရပါတယ်တော်...၊ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ အိမ်နောက်ဖေးက ဝင်လာရတယ်လို့....၊ကဲထိုင်ကြပါ...
ကျွန်ုပ်။ ။ကဲ...ကျုပ်တို့အားလုံးသိပြီးသွားပြီ....ဒီတော့ ရှင်းရှင်းပဲမေးမယ်....ခင်ဗျားတို့က ကုမ္မာရီဂိုဏ်း
မယ်ဒန်ကိုး။ ။ကုမ္မာရီ........၊ကုမ္မာရီဆိုတာ မိန်းမကိုခေါ်တာမဟုတ်လား...၊ဟုတ်တယ်လေ...ကျွန်မတို့
က မိန်းမတွေ....၊ဒီတော့ ကုမ္မာရီတွေပေါ့.....အဲ့သာဘာဖြစ်သတုန်း...။
ကျွန်ုပ်။ ။အင်း...ခုလိုလွယ်လွယ်ဝန်ခံလိုက်တာကောင်းသဗျာ...၊ခင်ဗျားတို့က ဘယ်ကုမ္မာရီဂိုဏ်းကတုန်း၊
မယ်လမင်း။ ။အို...ဘယ်နှယ် ပေါက်ပေါက်ရှာရှာတွေလာမေးနေသတုန်း...ကျွန်မတို့က ထမီလည်း
ကျွန်ုပ်။ ။အော်.....လက်စသတ်တော့ ကုမ္မာရီဂိုဏ်းက ထမီဝတ်ဂိုဏ်း၊ဘောင်းဘီဝတ်ဂိုဏ်းအပြင် စကပ်
ဝတ်ဂိုဏ်း ဆိုပြီး သုံးဂိုဏ်းတောင်ကွဲသွားပါရောလား....။
မယ်ဒန်ကိုး။ ။အလိုလေးတော်....ဘာတွေလာပြောနေသတုန်း...၊ကျွန်မတို့က မြန်မာမိန်းကလေးတွေ
ဆားပုလင်းအွတ်ထောင်။ ။အဟမ်း.....ဒီလိုဗျာ....လိုရင်းမရောက်ဘူးဖြစ်နေတာပါ။ ကျုပ်တို့က
မယ်ဒန်ကိုး။ ။အော်...မမိုးငွပ်လား....သိတော့သိတယ်...ဒါပေမယ့် ဆေးတိုက်သွားရင်းခင်နေတာပါ။
ငံပြာရည်ပုလင်း။ ။ဟင်....လမ်းစကပျောက်ပြန်ပါရောလား......၊ခင်ဗျားတို့ တကယ်မသိတာလား...
မယ်လမင်း။ ။တကယ်မသိလို့ မသိဘူးပြောတာပါတော်....၊ဘာညာစရာရှိသတုန်း...၊အဲ...နေဦး....တစ်ခု
သတိရပြီ....၊ဟိုနေ့က ကျွန်မတို့ဆေးခန်းသွားပြတော့ သူကတောင်ပြောနေသေးတယ်...၊တနင်္ဂနွေနေ့
ကျရင် သူ ဂျူဗလီဟောက ကဗျာရွတ်ပွဲသွား နားထောင်မလို့တဲ့.....ကျွန်မတို့ကိုတောင် လိုက်မလားခေါ်
ဆားပုလင်း။ ။အင်း...ဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ပဲဗျ...၊ဂျူဗလီဟောမှာ ကဗျာရွတ်ပွဲရှိတာတော့ ကျုပ်လည်း
ကိုရင်သာပျော့။ ။ကဲ ဒါဖြင့် ကျုပ်တော့ နေခဲ့ဦးမယ်....ခင်ဗျားတို့ဘာသာပဲပြန်နှင့်ကြပေတော့...။
ဤသို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့လည်း အင်းစိန်စီအိုင်ဒီမှ အော်စတင်ကားမဲလေးအား မိုင်ကုန်တင်လျက် ရန်ကုန်
ဘက်ဆီသို့ ပြန်လာခဲ့ကြလေတော့သည်။ဂျူဗလီဟောသို့ရောက်သောအခါ ကဗျာရွတ်ပွဲပင် စနေပြီဖြစ်
သည်။ကျွန်ုပ်တို့လည်း ကဗျာရွတ်ပွဲအားအသာအကဲခတ်ကြည့်လိုက်သည်။စင်မြင့်ထက်တွင်မူ ဆံပင်
ကောက်တိကောက်ကွေး၊စုတ်တိစုတ်ဖွားနှင့် လူငယ်တစ်ဦးသည် ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်၌ ထူးခြားသော သင်္ကတများကို ဟန်ပါပါရေးခြစ်နေလေသည်။
ငံပြာရည်ပုလင်း။ ။ဟင်....ကဗျာရွတ်ပွဲဆိုပြီး ဘာမှမရွတ်ပဲ ဘာသင်္ကေတတွေရေးနေတာတုန်းဗျ...။
ကျွန်ုပ်။ ။အဲ့ဒါ သင်္ကေတကဗျာ လို့ခေါ်သကွဲ့...၊ကဗျာကို စကားလုံးတွေနဲ့မရေးပဲ အဲဒီလို သင်္ကေတ
တွေနဲ့ ရေးတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်ကဗျာအမျိုးအစားပေါ့လေ....၊ဒီကဗျာပုံစံကို လောကီပညာရှင်တွေကပဲတီ
ထွင်ခဲ့တာကလား....၊လျှို့ဝှက်နက်နဲတဲ့ ပညာရပ်တွေကို ခုလိုသင်္ကေတကဗျာအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ကြပြီး
(မှတ်ချက်။ ။တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်လုမတတ်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သော အနှီး သင်္ကေတကဗျာအားယနေ့ခေတ်
လူငယ်များ မြင်ဖူးစေရန် နမူနာသင်္ကေတအချို့အား ကျွန်ုပ်၏ မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါသည်)
LOL :-* ^_^ -_- O.o
>:O <3 :v :|] :) 8)
:( :P :D :O ;) 3:)
B) :3 >:( :/ :’( O:)
Ї ℓ◎√ε ƴøü ṧø μü¢♄
ကျွန်ုပ်တို့သုံးဦးလည်း ပရိတ်သတ်အား အကဲခတ်ကြည့်လိုက်သည်ရှိသော် ရှေ့ဆုံးခုံတန်း၌တစ်ဦးတည်း
ထိုင်နေသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို သတိပြုမိကြလေသည်။ထိုအမျိုးသမီး၏ပုံပန်းသဏ္ဍာန်မှာ မယ်ဒန်ကိုး
တို့ ပြောပြလိုက်သော သူနာပြုဆရာမလေးမမိုးငွေ့၏ပုံသဏ္ဍာန်ပင်ဖြစ်ပေသည်။ကျွန်ုပ်တို့လည်း ထိုအမျိုး
ကျွန်ုပ်တို့အားသတိထားမိဟန်မတူပေ။မှတ်စုစာအုပ်တွင် ကဗျာများကို ကူးရေးလိုက်၊နှုတ်မှလည်း တစ်
ထိုအချိန်မှာပင် ကဗျာဆရာဒေါက်တာစုတ်ဖွားလည်း သူ၏သင်္ကေတကဗျာများကိုတစ်ခန်းရပ်ပြီးသကာလ
ည ည တွေမှာ မနှင်းဆီက ချောက်ခြားစေခဲ့.....
ကျွန်တော် နဲ့ ဆိုဂျူး.......
ဆိုဂျူး နဲ့ ကျွန်တော်......
ကျွန်ုပ်လည်း သူနာပြုဆရာမလေးမိုးငွပ်ကိုပင် သတိမပြုမိတော့ပဲ ကဗျာဆရာဒေါက်တာစုတ်ဖွား၏ ကဗျာ
(မှတ်ချက်။ ။ထိုစဉ်အချိန်က အနှီးကဗျာဆရာလေးအားသာမာန်ကဗျာဆရာဟုပင် ထင်မှတ်ထားမိလေ
သည်။ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သော လောကီပြင်ညာရှင်တစ်ဦးနှင့် ထိုကဗျာဆရာလေးအကြား တစ်စုံတစ်ရာ ပတ်
သက်ဆက်နွယ်လာလိမ့်မည်ဟု ယောင်ယမ်း၍ပင်မတွေးမိပါချေတည့်.....။သို့သော် လောကကြီးကား
ဆန်းကြယ်လှပေသည်။ထိုထိုသော ဆန်ကြယ်လှသည့်လောကကြီးတွင် အနှီးကဗျာဆရာလေး၏ဘဝ
သည်လည်း ဆန်းကြယ်လှပေ၏။ထိုကဗျာဆရာလေး၏ ဆန်းကြယ်သောဘဝကား....လွမ်းမောဖွယ်
ကောင်း၏၊ထိုအတူ ပျော်ရွှင်ဖွယ်လည်းအတိပေတည်း။တစ်ခါတစ်ရံ နှစ်လိုဖွယ်ရှိသလို၊တစ်ခါတစ်ရံ၌လည်း
တစ်ရံတွင်မူ ကြောက်ရွံဖွယ်ရာဖြစ်သလို၊တစ်ခါတစ်ခါတွင်မတော့ ပျော်ရွင်ဖွယ်ရာဖြစ်ချေတော့သည်။
ပြောရလျှင်မူထိုကဗျာဆရာလေး၏ဘဝတွင် သလဲသီးအတွင်းမှ အကန့်အကန့်များသဖွယ် လောကဓံ
တရားတို့သည် သူ့အကန့်နှင့်သူ တည်ရှိနေကြလေသည်။နောင်အလျှင့်သင့်သည့်တစ်ချိန်တွင် စိတ်ဝင်
စားဖွယ်ကောင်းလှသည့် ထိုကဗျာဆရာလေး၏အကြောင်းအား....." ကဗျာဆရာဒေါက်တာစုတ်ဖွား "
ဆားပုလင်းအွတ်ထောင်။ ။ဒီအမျိုးသမီးက မမိုးငွပ် ဆိုတာ သေချာသွားပြီဗျ....။
ကဗျာများအကြားနစ်မျောနေသောကျွန်ုပ်လည်း ဆားပုလင်းအွတ်ထောင် တီးတိုးပြောလိုက်သောစကား
ကိုကြားသောအခါမှ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပြန်လည်သတိပြုမိလေတော့သည်။
ဆားပုလင်း။ ။သေချာဆို သူ့မှတ်စုစာအုပ်အဖုံးမှာ မိုးငွပ်လို့ ရေးထားတာတွေ့လိုက်လို့ပဲ....
ငံပြာရည်ပုလင်း။ ။ကိုင်း...ဒါဖြင့်ဆရာရယ်...ဒီအမျိုးသမီးကို ထုံးစံအတိုင်း ရုံးခေါ်သွားပြီး စစ်မေးကြရ
ဆားပုလင်း။ ။ဟဲ့...အဲဒီလိုလုပ်လို့မဖြစ်သေးဘူးကွ၊တစ်လောကမှ အမျိုးသမီးလေးတစ်ဦးကို အဲဒီလို
အစစ်အဆေးကောင်းလို့ တို့ရုံးပေါ်က ခုန်ချပြီးသေကြောင်းကြံသွားတဲ့အမှုကဖြင့် မပြီးသေးဘူး...၊နဂိ်ုက
မှ နာမည်ပျက်နေရတဲ့အထဲ ဒီတစ်ခါဆို အဖက်ကိုဆယ်လို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး ငါ့လူရ....။
ဆားပုလင်း။ ။သူပြန်သွားမှ ငါတို့အသာနောက်ယောင်ခံလိုက်ကြတာပေါ့ကွာ...
ဤသို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သုံးဦးလည်း ကဗျာရွတ်ပွဲအပြီးတွင် သူနာပြုဆရာမလေးမိုးငွပ်အိမ်သို့ နောက်
(အလုပ်များ ယားလို့ပင်မကုတ်နိုင်အောင်ရှုပ်နေသောကြောင့် ကျွန်ုပ်၏ ဝတ္ထုမဟာဂျီးအား စဉ်ဆက်မပြက်
မရေးနိုင်ပဲ အချိန်အနည်းငယ်ကြန့်ကြာသွားလေသည်၊ပိတ်သတ်များ သာဓုခေါ်ကြပါကုန်လော့....:)))၊
အပိုင်း၎ တွင်ဇာတ်သိမ်းနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ရပေ၏၊ဆက်လက်မျော့ကြပါကုန်......:)))))))
Posted by ညိမ်းနိုင် at 7/26/2012 21 comments Links to this post
ကျောင်းဒါယကာ ကျောင်းဒါယကာမအဖြစ် ခံယူပွဲ ( သို့မဟုတ် ) အလှုဖိတ်ကြားခြင်း
သူငယ်ချင်း ညီအကို မောင်နှမ အားလုံး မင်္ဂလာပါလို့ ဦးစွာပထမ နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်
လူတိုင်း လူတိုင်းဟာ အဆင်းအနံ့နဲ့ ပြည့်စုံဖွယ် အစားကောင်း အသောက်ကောင်းလေးများ စားသောက်ဖို့ ကြုံကြိုက်တဲ့အခါပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ အေးချမ်းနှစ်လိုဖွယ် အရိပ်အာဝါသ ရှု့ခင်းအလှတွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ နေရာကောင်းလေးတစ်ခုမှာ နားခိုဖို့ ကြုံကြိုက်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ နောင်ဘ၀ကုသိုလ်ကံ ပါရမီ ကောင်းဖို့ အတွက် သဒ္ဓါ ထက်သန်စွာ လှုဒါန်း ကုသိုလ်ပြူနိုင်တဲ့ နေရာကောင်းလေးများ ကြုံကြိုက်လာတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ မိမိတို့ရဲ့ ခင်ရာမင်ရာ မိတ်ကောင်းဆွေမွန် တွေကို သတိရတတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားရှိတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ချစ်ခင်ရပါသော ညီအကိုမောင်နှမများ ၊ မိတ်ကောင်းဆွေမွန်များ ၊ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များကို သတင်းကောင်းလေးတစ်ခု ပါးဖို့ အချိန်ကျရောက်လာပြန်ပါပြီ ။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာမုဒိတာလူငယ်များအဖွဲ့ရဲ့ တတိယအကြိမ်မြောက် အလှုဖြစ်တဲ့ သံလျှင်မြို့နယ် မြန်မာ့ရေနံရပ်ကွက်မှာ တည်ရှိတဲ့ သာယာကုန်း ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းသို့ ကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ် လှုဒါန်းမှုမှာ မိမိတို့ ချွေးနဲစာထဲမှ တတ်နိုင်သလောက် သဒ္ဓါတရားထက်သန်စွာ လှုဒါန်းနိုင်ရုံမျှဖြင့် ရာသက်ပန် ကျောင်းဒါယကာ ၊ ကျောင်းဒါယကာမအဖြစ် ခံယူနိုင်မည့်အကြောင်းလေးကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့် အသိပေးမျှဝေလိုက်ရပါတယ် ။
ဦးစွာ ပထမ ရန်ကုန်မြို့တစ်ဖက်ကမ်း သန်လျင်မြို့ မြန်မာ့ရေနံရပ်ကွက်မှာတည်ရှိတဲ့ သာယာကုန်း ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ..။
သာယာကုန်း ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းကို ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးတိက္ခဥာဏမှ ၂၀၀၅ခုနှစ်မှာ ကိုယ်တိုင် ကြိုးစားရုန်းကန်ပြီး စတင်တည်ထောင် ခဲ့တဲ့ ဘုန်းတော်ကြီး ပညာသင်ကြားရေး ကျောင်းလေး ဖြစ်ပါတယ် ။ အခက်အခဲ အမျိုးမျိုးကြားထဲကနေ အပင်ပန်းခံ ကြိုးစားတည်ထောင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိ ၂၀၁၂ ပညာသင်နှစ်မှာတော့ သူငယ်တန်းမှ ခုနစ်တန်းအထိ ဆင်းရဲချို့ တဲ့တဲ့ ကလေးငယ်တွေ ၊ မိဘမဲ့ကလေးငယ်တွေရော စုစုပေါင်း ကျောင်းသူကျောင်းသား ၃၀၀ကျော်ကို အခမဲ့လက်ခံသင်ကြားပေးနေတဲ့ ပရဟိတပညာသင်ကြားရေးကျောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
စာသင်ကျောင်းမှာ ဆရာ ၊ ဆရာမဦးရေ စုစုပေါင်းဆယ်ဦိးရှိပြီး တစ်ဦးလျင် လစဉ်စေတနာကြေးသုံးသောင်းကျပ်နှုန်းဖြင့် နှစ်ပေါက်အောင် ဆရာတော်မှ အဓိက ထောက်ပံ့ကျားကန်ပေးထားရတဲ့ ကျောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းမှ ခုနစ်တန်းအောင်မြင်ပြီဆိုရင်တော့ အစိုးရပညာသင်ကျောင်းသို့ ဆက်လက် တက်လှမ်းနိုင်အောင်လည်း ထောက်ပံ့ပေးဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ကျောင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ လက်ရှိ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ သင်နှစ်အတွက် ဆယ်တန်းဖြေဆိုနိုင်မည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူ ကိုးဦးတိတိကို ထောက်ပံ့ သင်ကြားပေးလျှက်ရှိပါတယ် ။ ကျောင်းတွင် တက်ရောက် ပညာသင်ကြားနေသော ကလေးငယ်များ အားလုံးကို တတ်စွမ်းနိုင်သလောက် အဟာရဖြစ်အောင် ကျောင်းမှာ ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးပြီး ပညာရေးပါရမီကို ဖြည့်စွက် ခရီးဆက်နေတဲ့ ကျောင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုတစ်ကြိမ်မှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာမုဒိတာ လူငယ်များ အသင်းမှ သံလျှင်မြို့နယ် သာယာကုန်း ဘုန်းတော်ကြီးးသင် ပညာရေးကြောင်းလေးကို လှုဒါန်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ဘာ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ လှုဒါန်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသလဲ . . . . .
ချစ်ခင်ရသော ညီအကို မောင်နှမများကို
သူတို့လေးတွေအတွက် နံပါတ်(၁) လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ သူတို့တွေရဲ့ ထမင်းစားဆောင်ကို ပထမဦးစွာ ကြည့်ရှုကြစေချင်တယ် ။
မြင်ရတဲ့အတိုင်း ရေပတ်လည်ဝိုင်းပြီး တဲသာသာရှိတဲ့ ကျောင်းဆောင်လေးဟာ ကလေးငယ်ပေါင်း (၃၀၀)ကျော်ကို ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးနေတဲ့ ထမင်းစားဆောင်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ နေရာအခက်အခဲကြောင့် ကလေးငယ် အားလုံးကို တပြိုင်တည်း ကျွေးမွေးနိုင်ခြင်းမရှိပဲ ကလေးငယ် အယောက် (၅၀)စီကို ငယ်စဉ်ကြီးလိုက် ခွဲပြီး အလှည့်ကျ ကျွေးမွေး ရတယ်လို့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်မှ မိန့်ဆိုပါတယ်။
ချို့ တဲ့တဲ့နေရာနဲ့ မပြည့်စုံတဲ့ သူတို့ရဲ့ ထမင်းဝိုင်း.. ကလေးငယ်တွေ ဆိုတော့လည်း . . .
ထမင်းတစ်နပ် ကျွေးမွေးလှုဒါန်းတဲ့ အလှု့ရှင်တွေ ကျန်းမာချမ်းသာစေဖို့ လက်စုံအုပ်မိုး ရှိခိုး ဦးချလျှက် မစားခင် ဦးစွာ ပထမ ဆုတောင်းပေးနေကြလေရဲ့..
ကလေးငယ်များ အပူအပင်ကင်းစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ စားဝတ်နေရေး ပြေလည်နိုင်ရေးကိုသာ အဓိက အားထုတ်နေရလို့ ထမင်းစားဆောင်ဟာ ကလေးငယ်များအတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ကိုက်ညီမှုမရှိတာကို သိနေပေမဲ့ အားမတန် မာန်လျှော့ပြီး လျစ်လျူရှုထားရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အလှုရှင်သာ ရှိမယ်ဆိုရင် ဆရာတော်က “သူကိုယ်တိုင် နေ့မအား ညမနား အမြန်ဆုံးပြီးအောင် ဆောက်လုပ်ပစ်ချင်တာ”လို့လည်း မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပြီး ဒုတိယလိုအပ်ချက်ကတော့ ဆရာဆရာမပေါင်း ဆယ်ဦးအတွက် စေတနာကြေး ( ၃၀၀၀၀ကျပ်) ထောက်ပံ့ပေးမဲ့သူမရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ တတိယ လိုအပ်ချက်အနေနဲ့ ကလေးငယ်များအတွက် စာသင်ခုံ လုံလောက်မှု မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ တစ်စုံလျှင် လေးသောင်းကျပ်နှုန်းခန့်ကျနိုင်ပြီး ယခုနှစ် သင်ကြားဆဲ ၂၀၁၂ ပညာသင်နှစ်အတွက် စာသင်ခုံ ( ၁၅) စုံခန့် လိုအပ်နေသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နောက်ဆုံးလိုအပ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ ကလေးငယ်များအတွက် ချုက်ပြုတ်ကျွေးမွေးစရာ ကုန်ခြောက်များနှင့် စာအုပ်ခဲတံများ၊ကိုရင်ငယ်လေးများ အတွက် သင်္ကန်းစသည်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သာယာကုန်းဘုန်းတော်ကြီး ပညာသင်ကြားရေး ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးတိက္ခဥာဏ
ဆင်းရဲချို့တဲ့ပြီး ပညာသင်ကြားရေးအတွက် ခက်ခဲမှုရှိတဲ့ ကလေးငယ်များရဲ့ အိမ်
အထက်မှာ ကျွန်တော်တို့ ပြောပြခဲ့သလိုပဲ ဘုန်းတော်ကြီးသင် စာသင်ကျောင်းအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ကျောင်းဆောင် (သို့) ကလေးငယ်တွေအတွက် ချို့ တဲ့နေတဲ့ ထမင်းစားဆောင်ကို အဓိက ပြုပြင်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာမုဒိတာ လူငယ်များ အဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆရာတော်က အလှုရှင်ရှိတာနဲ့ အထက်ပါ ရွက်ဖျင်တဲ နေရာမှာပဲ (၁၅ x ၃၀)ပေအကျယ် -အုတ်ခံ ကျောင်းဆောင်လေးတစ်ခု ဆောက်လုပ်မှာပါ။ ချစားမြေဖြစ်တာကြောင့် အုတ်နဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်းချပြီး အောက်ခြေကို လေးပေအမြင့်အထိ အုတ်တက်ပါမယ်။ လေးပေ အထက်ကိုတော့ သံဇကာကာရံပြီး အပေါ်ကသွပ်မိုးမယ်ဆိုရင် ကလေးငယ်တွေအတွက် အန္တရာယ်ကင်းပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ထမင်းစားဆောင် (သို့) ကျောင်းဆောင်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အဆောက်အဦးပုံကြမ်းလေးတစ်ခု အခိုင်အမာရရှိနိုင်ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဆရာတော်ပြောတဲ့ အဲ့ဒီအထိ အဆောက်အဦးရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကို ကျပ် ၃၅သိန်းမှ ၄၅သိန်းကြားလို့ ခန်မှန်းတွက်ချက်ပြပါတယ်..။ ကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ် ပြီးစီးတာနဲ့ အလှုရှင်အားလုံးရဲ့ အမည်နာမကို ဆရာတော်ရဲ့ဆန္ဒအရ ကျောင်းရဲ့ နံရံမှာ သဘောင်္ဆေးနဲ့ ကဗ္ဗည်းရေးထိုးကာ ရေစက်ချပွဲအခမ်းအနားကို အလှုရှင်များနဲ့အတူ ပြုလုပ်မယ်လို့ ဆရာတော်က ဆိုပါတယ်။
ဒီကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ် လှုဒါန်းနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာ အမာခံ အလှုရှင်များ မရှိတာက တစ်ကြောင်း ၊ ပြည်ပရောက် လူငယ်များ စုစည်းပြီး မိမိတို့ရဲ့ ချွေးနည်းစာ လုပ်ခ လစာလေးများထဲမှ တတ်နိုင်သလောက်လေးကိုသာ လှုဒါန်းနိုင်တာက တစ်ကြောင်းမို့ ကလေးငယ်တွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ကျောင်းဆောင်တစ်ဆောင်လုံးကို ဆောက်လုပ်ပေး နိုင်ဖို့အထိတော့ အာမခံပေးနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ သို့ပေမဲ့လည်း မြန်မာလူမျိုးပီပီ သဒ္ဓါတရား ထက်သန်စွာ လှုဒါန်းချင်ကြတဲ့ စိတ်ကလေးတွေ ကိန်းအောင်းနေသူများမို့ တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစား စုပေါင်းလှုဒါန်း နိုင်မည်လို့ ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ကျောင်းဆောင်လေး ဖြစ်မြောက်အောင် မိမိတို့ရဲ့ ညီအကိုမောင်နှမ သူငယ်ချင်း မိတ်ကောင်းဆွေမွန်များကို လှုဒါန်းနိုင်အောင် အသိပေး တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ် ။
မြန်မာမုဒိတာလူငယ်များအဖွဲ့အနေနဲ့ အလှုခံတဲ့ရက်မှစပြီး အလှုပိတ်သိမ်းချိန်အထိ ရရှိလာမဲ့အလှုငွေဟာ လိုအပ်တဲ့ ပမာဏကို ပြည့်မှီတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဆရာတော်နဲ့တိုင်ပင်ပြီး ကျောင်းဆောင်တစ်ခုလုံးကို တာဝန်ယူကာ ဆရာတော်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ အမြန်ဆုံးဆောက်လုပ် လှုဒါန်းပါမယ်။ အကယ်၍ ရရှိလာတဲ့အလှုငွေဟာ ကျောင်းဆောင်အတွက် လိုအပ်တဲ့ပမာဏကို ပြည့်မှီနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ တခြားလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ ဆရာဆရာမများအတွက် လစဉ်စေတနာကြေး၊ စာသင်ခုံနဲ့ မီးဖိုချောင်ပစ္စည်းများကို ထည့်ဝင်လှုဒါန်းပြီး ပိုလျှံတာကို ကျောင်းဆောင်အတွက် မတည်ငွေ အဖြစ် လှုဒါန်းခဲ့ပါမယ်။
ယနေ့ ( ၁၃.၇.၂၀၁၂၊ သောကြာနေ့ ) မှ စတင်ပြီး ကလေးငယ်များအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီး သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော ထမင်းစားကျောင်းဆောင်လေး ဆောက်လုပ် လှုဒါန်းပေးနိုင်ဖို့ အဓိကဦးတည်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ပညာပါရမီ အလှုလေးကို စတင် လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါပြီ ။ နောက်ဆုံး အလှုခံပိတ်ရက်ကိုတော့ (၁၅.၈.၂၀၁၂-ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အထိ) သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အကယ်၍ အလှုခံပိတ်သိမ်းချိန်တွင် ရရှိလာမဲ့အလှုငွေဟာ ကျောင်းဆောင်လေး ဆောက်လုပ်နိုင်မည့် ပမာဏကိုပြည့်မှီဖို့ အနည်းငယ်လောက်မျှသာ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အလှုခံ ပိတ်သိမ်းမည့်ရက်ကို ရက်အနည်းငယ် ရွှေ့ဆိုင်းပြီး အလှုပမဏ ပြည့်မှီတဲ့အထိ စောင့်ဆိုင်းကာ ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်နိုင်ဖို့ကို ပြီးဆုံးတဲ့အထိ အပြည့်အ၀ တာဝန်ယူ ပေးသွားမှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ညီအကိုမောင်နှမများကို အသိပေးအပ်ပါတယ် ။
မြန်မာမုဒိတာ လူငယ်များအဖွဲ့အနေနဲ့ မရမ်းချောင်း အနာကြီးရောဂါစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာသို့ လှုဒါန်းစဉ်က ကျန်ရှိတဲ့ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်း လက်ကျန်အလှုငွေ စုစုပေါင်း ၈၁၇၁၄.၅၀ ကျပ်ဖြင့် သာယာကုန်းရွာ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေး ကျောင်းအတွက် အလှုခံခြင်းအား စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည် ။
နိုင်ငံအသီးသီးမှ အလှုရှင်များအနေနဲ့ အောက်ပါအကျိုးတော်ဆောင်များထံမှာ ထည့်ဝင်လှုဒါန်းနိုင်ပါတယ် ။
+၁ ၂၀၁ ၈၈၈ ၉၇၅၁
~ ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့် ~
Posted by ညိမ်းနိုင် at 7/13/20122comments Links to this post
နင့်အသက်ငါ့ပေးဆရာကြီးညိမ်းနိုင် နှင့် ကုမ္မာရီဂိုဏ်း အရှုပ်တော်ပုံ (၂)
အပိုင်း(၂)_ _ _
ငံပြာရည်ပုလင်းမျှစ်မောင်၏ အယောင် ကောင်းမှုကြောင့် လိုရင်းပျောက်မတတ်ဖြစ်သွားသည်ကို ဆားပုလင်းအွန်ထောင်မှ စကားပြန်စလိုက်လေသည်။
ဆားပုလင်း။ ။အဟမ်း....မင်းကြီးခင်ဗျ...ဟောဒီက ဆရာကြီးကတော့ ကျွန်တော်ပြောဖူးတဲ့ နင့်အသက်
မင်းကြီး။ ။ ငါ့အသက်နင့်ပေး ဟုတ်လား....ဘာအဓိပ္ပာယ်တုန်း...။
မင်းကြီး။ ။မောင်မင်းအနေနဲ့တော့ နင့်အသက်ငါ့ပေး၊ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ ငါ့အသက်နင့်ပေးပေါ့...မဟုတ်ဘူး
အံမာလေး..အရေးထဲ မြန်မာစာကျွမ်းကျင်သူဘိလပ်သားနဲ့မှလာတွေ့နေသေး....ဟု ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမှ
နားထောင်ယူရသော အင်မတန်ပီသကြည်မြသည့် ဘိလပ်စကားနှင့် အောက်ပါအတိုင်း မင်းကြီးအား
နင့်အသက်ငါ့ပေး ၏အဓိပ္ပာယ်ကို ရှင်းပြလိုက်လေသောဟူသတတ်.......။
ကျွန်ုပ်။ ။အစ်ဇ်မင်းစ် ဂေ့မီရွှာဆိုး.....အစ်ဖ်စ် ရွှာဂေ့မီရွာဆိုး......အိုင်.....အိုင်....အိုင်....(ကျွန်ုပ်လည်း
ကျက်ထားသော ဘိလပ်စကားများမေ့နေသဖြင့် ခွေးအကြီးလှည်းနင်းသလို တအိုင်အိုင်နှင့် ၅မိနစ်ခန့်
ခွေးဖြစ်သွားသေးသောဟူသတတ်....)အိုင် ပရိုတတ်စ်စ်စ်စ ရွှာဘော်ဒီ၊ရွာဟဲ၊ရွှာ...ရွှာ....တော...တော....
မင်းကြီး။ ။ဟုတ်...ဟုတ်..ဟုတ်ပါဘီ ဆရာဂျီးရယ်....ကျွန်ုပ် မြန်မာစာကို ကိုးထပ်ကြီးဘုရားက
ဆရာတော်ဦးသောဘိတဆီမှာ သုံးနှစ်သုံးမိုးကြာအောင် သင်ခဲ့တဲ့သူပါ။ကျွန်ုပ်ကို မြန်မာလိုပဲရှင်းပြပါ
တော့...၊ဆရာကြီးရဲ့ ဘိလပ်စကားကို ကျွန်ုပ် ဘိလပ်သားပင်နားမလည်....။
ကျွန်ုပ်။ ။အိမ်း....ကောင်းပါ့မင်းကြီးရယ်...စောစောကပြောရင် ကျွန်ုပ်လည်း တံတွေးကုန်သက်သာပေ
သပေါ့...။ဂလိုလေ...မင်းကြီးက ကျွန်ုပ်ဆီမယ် မင်းကြီးရဲ့ ဝိညဉ်ကို အပ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖြင့် ကျွန်ုပ်က
မင်းကြီးရဲ့ကျမ်းမာရေး၊စီးပွားရေး၊ရာထူးတိုးတက်ရေး တို့အပြင် နာနာဘာဝ၊ဝိနာဘာဝ၊စုန်း၊ကဝေ၊အောက်
လမ်း၊အထက်လမ်း၊အထက်မရောက်အောက်မကျလမ်း၊မိုးပျံလမ်း....အဲမှားလို့...အဲ့လို မျိုးတွေရဲ့ အတိုက်
အခိုက်ကပါ မင်းကြီးကို ကာကွယ်ပေး သွားမယ်လို့ဆိုလိုတာပါပဲ....။
မင်းကြီး။ ။ဂလိုဖြင့်ကောင်းပါ့ဗျာ...သို့ပေမယ့် ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ ဒါတွေကိုစိတ်မဝင်စားပေဘူး...၊လောလော
ဆယ်မှာ ကျွန်ုပ်ကို ကောင်းစွာဒွတ်ခပေးနေတဲ့ လူသတ်တရားခံတွေကိုဖမ်းမိဖို့ရာမှာ ဆရာကြီးကူညီပေး
ပါ...။ခုလေးတင်ပဲ မိန်းမတစ်ယောက်က သူ့ကိုယ်သူ အမေရိကန်က လွှတ်လိုက်တဲ့ စီအိုင်အေအေးဂျင့်
စုံထောက်တစ်ဦး။ ။အထွေအထူးတော့ပါမသွားဘူးဗျ၊မနေ့ကသေသွားတဲ့ ကုလားဆရာဝန်ကြီးနာရရန်း
တွေ ခြေရှုပ်လေဖြစ်နေတာကိုးဗျ၊၊မင်းကြီးပြန်လာလို့အစီရင်ခံတော့၊ သူ ဟုမ်း ကိုမေးကြည့်မှ ဘယ်စီအိုင်
ငံပြာရည်ပုလင်းမျှစ်မောင်။ ။ဟင်...မင်းကြီးက သူ့ဟုမ်းကိုမေးကြည့်တာနဲ့သိရောလား....၊သူ့အိမ်က
ဆားပုလင်းအွတ်ထောင်။ ။ကတောက်.....ဒီကောင်ကတစ်မျိုး...ဟုမ်း ဆိုတာ နင့်ဂျီးဒေါ်မင်းကြီးရဲ့အိမ်
ကျွန်ုပ်တို့ သုံးဦးလည်း စိတ်ပျက်စွာဖြင့် မင်းကြီးရုံးခန်းမှထွက်လာပြီး နီးရာလက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွင်
ဆားပုလင်း။ ။ဒီအမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာကြီးအမြင်ကိုပြောပါဦးဗျာ....။
ငံပြာရည်ပုလင်း။ ။ဆရာကြီး ဟောဒီမှာ ရေနွေးလေးသောက်ပါဦးလား...ချွဲကျပ်နေတယ်ထင်တယ်...။
နင်တို့နားလည်လွယ်အောင်ဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲဆိုတာ တွေးရင်း ချောင်းဟန့်တာဟဲ့....။အင်း...ပြောရရင်
တော့ ဇာတ်လမ်းကရှည်တယ်မောင်တို့ရဲ့....။ကုန်းဘောင်ခေတ်က အင်မတန်မှ နာမည်ကြီးတဲ့ သီလရှင်
မယ်ကင်းဆိုတာ မောင်တို့လည်းကြားဖူးမှာပေါ့....၊အင်း...ဒီအမှုက သီလရှင်မယ်ကင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး
ငံပြာရည်ပုလင်း။ ။အောင်မလေးဆရာကြီးရယ်....၊မဆိုင်တာများ ထည့်ပြောနေရသေးတယ်...ခက်တာပဲ၊
ကျွန်ုပ်။ ။ဟဲ့..စကားကိုဆုံးအောင်နားထောင်စမ်းဘာာာာ။ ကုန်းဘောင်ခေတ်မှာ အဲဒီသီလရှင်မယ်ကင်း
နဲ့ခေတ်ပြိုင်၊ လောကီဘက်မှာ အင်မတန်နာမည်ကြီးတဲ့ လူဝတ်ကြောင်မယ်ကွမ်း ဆိုတာရှိခဲ့တယ်ကွဲ့...။
မင်းတုန်းမင်းလက်ထက်မှာ အပျိုတော်တွေကို တတ်သင့်တတ်အပ်တဲ့ လောကီပညာတွေ သင်ကြားပေး
ရတဲ့ ဆရာမကြီးတစ်ဆူဆိုပါတော့လေ...၊မျက်စတစ်ချက်ပစ်တာနဲ့ တဘက်သားတုံးကနဲလဲသေသွားနိုင်
အောင်ကို အင်မတန်ထက်မြက်တဲ့ ပညာရပ်တွေကိုသင်ကြားပေးရသူပေါ့...။ မင်းတုန်းမင်းလွန်လို့ သီပေါ
မင်းနန်းတက်လာတော့ အဲ့ဒီမယ်ကွမ်းလည်း နန်းတော်ထဲမှာမနေတော့ပဲ ပင်လယ်ထဲက ရှန်ကြားပူ ဆိုတဲ့
ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းမှာ တစ်ယောက်တည်းသွားနေ နေတော့သတဲ့....။
ဆားပုလင်း။ ။အင်း...ကျွန်းနာမည်ကအဆန်းပါလား...၊ထားပါတော့လေ...၊သူမရှိတော့ သူ့ပညာတွေ
ကျွန်ုပ်။ ။အိမ်း....၊သူလည်းဒါကို တွေးမိ၊စိုးရိမ်မိတယ်ထင်ရဲ့...၊သူမရှိတော့ပေမယ့် နောင်လာနောက်သား
တွေ သူ့ပညာရပ်တွေကို လေ့လာဆည်းပူးနိုင်အောင် ကျမ်းစာအုပ်ကြီးတစ်အုပ်ရေးသားပြုစုထားခဲ့တယ်
ကွယ့်...၊အဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကြီးနာမည်က ခအုမဒေါ့ကွန်း တဲ့......။
ကျွန်ုပ်။ ။နာမည်ကထူးဆန်းဆို ကျမ်းထဲမှာပါတဲ့ပညာရပ်တွေကလည်း အထူးအဆန်းကိုး...မောင်ရဲ့...၊
ပြီး အဲ့ဒီကျမ်းကို ရိုးရိုးဘာသာစကားနဲ့ရေးထားတာမဟုတ်ပဲ ထူးဆန်းတဲ့ ကွန်ဖောင့် ဆိုတဲ့ စကားတစ်မျိုး
သုံးပြီးရေးသားထားတယ်ဆိုပဲ...၊ကျမ်းထဲကတစ်ချို့ ပညာရပ်တွေဆို အဲဒီကွန်ဖောင့်တတ်တဲ့သူဖတ်တာ
တောင် နားမလည်နိုင်ဘူး...၊သူကတော့ ကျမ်းအစမှာ အိပ်ငိုက်ပြီးရေးတယ်ပြောတာပဲ...၊ငါ့စိတ်ထင်တော့
ကျွန်ုပ်။ ။ဒီလိုကွယ့်.....၊သူထွက်သွားပြီးနောက်ပိုင်း သူ့တပည့်သားမြေးတွေက အဲဒီကျမ်းကြီးကိုလက်
ကိုင်ပြုလို့ သူ့ပညာတွေကိုလေ့လာဆည်းပူးကြသပေါ့လေ....၊အဲ့ဒီမှာပြောစရာရှိတာက သူ့ပညာတွေကို
မိန်းမတွေပဲ သင်ကြားလို့တတ်မြောက်နိုင်သတဲ့...။ဒီတော့ သူ့တပည့်ဆိုတာတွေကလည်းမိန်းမတွေချည်း
ပေါ့လေ....။သီပေါမင်း ပါတော်မူပြီးနောက်..ကိုလိုနီခေတ်ရောက်လာတော့ သူ့တပည့်မတွေထဲက မျိုးချစ်
စိတ်နိုးကြားသူတွေစုပြီး နယ်ချဲ့ ဗျစ်တစ်သျှတွေကို တော်လှန်ဖို့ ဂိုဏ်းတစ်ခုဖွဲ့လိုက်ကြသတဲ့.....၊အဲ့ဂိုဏ်း
ကိုကောင်းကောင်းကြီဒုက္ခပေးခဲ့နိုင်သပေါ့....၊ဘိလပ်က ဘုရင်မကြီးကိုပါ လောကီပညာတွေသုံးပြီး တိုက်
ခိုက်ခဲ့တဲ့အထိ တန်ခိုးထွားခဲ့သတဲ့....။နောက်ဆုံး ကိုလိုနီအစိုးရက သူရို့ဘိလပ်က အမှောင်လောကရဲ့
သခင်ကြီးဗိုဒီမော့ဆိုတဲ့ အောက်လမ်းဆရာကြီးတစ်ယောက်ကိုတောင် စေလွှတ်ပြီး နှိမ်နင်းခိုင်းရတယ်ဆို
ပဲ...၊အဲဒီ အောက်လမ်းဆရာကြီးတောင် ဒီက အမျိုးသမီးပညာရှင်တွေကိုမနိုင်ဘူးတဲ့..၊
ဆားပုလင်း။ ။မိန်းမလူစွမ်းကောင်းတွေပါလား ဆရာကြီးရယ်...ဒါနဲ့ အဲ့ဂိုဏ်းကဘယ်လိုဖြစ်လို့ ပြိုကွဲ
ကျွန်ုပ်။ ။အိမ်း...သူတို့ဂိုဏ်းကြီးပြိုကွဲပုံကတရားကျစရာလည်းကောင်း သံဝေဂယူစရာလည်းကောင်း
တယ်ကွဲ့....၊ဘယ်သူ့ဘယ်သူကမှ မဖြိုခွဲနိုင်တဲ့ဂိုဏ်းက အချင်းချင်း အတည့်မရှုဖြစ်ရာကနေ ပြိုကွဲသွား
ရတာပါပဲကွယ်....၊ဖြစ်ပုံကဒီလိုကွယ့်....၊ကုမ္မာရီဂိုဏ်းဝင်အမျိုးသမီးတစ်ချို့က ဟိုး အနောက်နိုင်ငံက
မိန်းမလူစွမ်းကောင်းတွေရဲ့ဝတ်ပုံစားပုံကိုအတုယူအားကျပြီး ဂျင်းဘောင်းဘီတို့ ဘာတို့ဝတ်ချင်သတဲ့။
ဘောင်းဘီဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ထမီထက်ပိုလုံခြုံသလို၊ယောင်္ကျားများနဲ့ယှဉ်ဘောင်တန်းပြီး
တိုက်ဟယ်ခိုက်ဟယ်လုပ်နေရတဲ့အမျိုးသမီးအတွက် အထူးသင့်လျော်တယ်လို့ ဆင်ခြေပေးကြသတဲ့။
အဲ...တချို့ကတော့ ဒါကိုမကြိုက်ဘူး...၊မြန်မာ့ရိုးရာကိုထိခိုက်တယ်..၊နယ်ချဲ့ကိုတော်လှန်ရာမှာ သူတို့
ဝတ်စားပုံတွေကိုပါတော်လှန်သင့်တယ်..၊အတုမယူသင့်ဘူး အစရှိသဖြင့်ပေါ့ကွယ်...။အဲဒီလိုနဲ့ ကုမ္မာရီ
ဂိုဏ်းလည်း ကုမ္မာင်္ရီ(ဘောင်းဘီဝတ်)ဂိုဏ်းနဲ့ ကုမ္မာရီ(ထမီဝတ်)ဂိုဏ်းဆိုပြီး ဗြန်းဗြန်းကွဲပါရောလား...။
ကျွန်ုပ်။ ။အိမ်း....မိန်းမဆိုသဟာကလည်း ခက်သားကလား....၊တည့်တုန်းကတော့ တည့်နေသပေါ့လေ၊
တဘက်သားအားနဲချက်တွေကို ရှာဖွေပြောဆိုကြနဲ့ဆိုတော့ နယ်ချဲ့တွေအဖို့ နှစ်ဂိုဏ်းလုံးကို နှိမ်နင်းဖို့
လွယ်ကူသွားသပေါ့လေ....၊ဒီလိုနဲ့ ဘောင်းဘီဝတ်နဲ့ထမီဝတ် ကုမ္မာရီဂိုဏ်းနှစ်ဂိုဏ်းစလုံး တဖြည်းဖြည်း
အားပျော့ ပျောက်ကွယ်လုမတတ်ဖြစ်သွားတာ ယခုထက်ထိပဲကွယ့်...။သို့ပေမယ့် လုံးလုံးပျောက်ကွယ်
ဆားပုလင်း။ ။ဒါနဲ့ဆရာကြီး...အခုဒီအမှုနဲ့ အဲဒီကုမ္မာရီဂိုဏ်းနဲ့ ဘယ်လိုပတ်သက်သလဲ...
သည်အရုပ်လေးဟာ ကုမ္မာရီဂိုဏ်းဝင်တွေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အချက်ပေး၊အဆက်အသွယ်လုပ်
တဲ့ အမှတ်အသားလေးပဲကွယ့်....။ပိုသေချာသွားတာက ဆေးတိုက်က ပန်းအိုးမှာထိုးထားတဲ့ပန်းကြောင့်
ငံပြာရည်ပုလင်း။ ။ဟုတ်လားဆရာကြီး...ဒါနဲ့ အဲ့ပန်းက ဘာပန်းတုန်း....။
ဆားပုလင်း။ ။ဟမ်....မျောက်ပေပန်း...ဟုတ်လား... ..ကြားဖူးပါဘူး ဆရာကြီးရယ်....။
ကျွန်ုပ်။ ။အိမ်း....မကြားဖူးဆို အဲ့ဒီပန်းပွင့်တဲ့မျောက်ပေပင်ဆိုတာ ဟိမဝန္တာမှာပဲရှိတာကွယ့်...၊တစ်နှစ်
လုံးနေမှ တစ်ပွင့်ပဲပွင့်ပြီး တစ်ခါပွင့်ရင် ခြောက်လလောက်ခံသကွယ့်....။အဲဒီပန်းဟာ ကုမ္မာရီဂိုဏ်းရဲ့
တော့မယ်ဆိုရင် ဒီပန်းကို လှမ်းပို့လေ့ရှိသကွယ့်...၊ပြီး မျောက်ပေပန်းဟာ လောကီအစီအရင်တွေလုပ်
တဲ့နေရာမှာ အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ ပန်းလည်းဖြစ်တယ်....။
ငံပြာရည်ပုလင်း။ ။အင်း....ရှင်းတော့ရှင်းလာပြီ...၊မရှင်းသေးတာက ဆရာဝန်ကြီးမစ္စတာနာရရန်းက
ကျွန်ုပ်။ ။ဒါကတော့ သူတို့ကိုဖမ်းမိမှပဲမေးကြည့်ပေတော့ကွယ်...၊တစ်ခုရှိတယ်...မစ္စတာနာရရန်းက
ဗျစ်တစ်သျှအလိုတော်ရိ ဖြစ်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ဒါမှမဟုတ် မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ဦးဦးကိုများ မတော်
မတရားလုပ်ခဲ့လို့များလား....၊ကုမ္မာရီဂိုဏ်းဟာ အဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုလည်း အပြစ်ပေးလေ့ရှိသကွယ့်....။
ဆားပုလင်း။ ။အင်း....ဆရာကြီးရေ....ကုမ္မာရီဂိုဏ်းဝင်လို့ယူဆရမယ့် နာစ်မလေးမိုးငွပ်ရဲ့နေရပ်လိပ်စာ
ကို မရှာနိုင်တာအတော်ဆိုးတာပဲဗျာ.....ကျွန်တော်တို့မှာ အဲဒီအစလေးပဲရှိတာကလား....။
ဆားပုလင်းအွတ်ထောင်၏ စိတ်ပျက်လက်ပျက်သံအဆုံး၌ ကျွန်ုပ်တို့သုံးဦးသားနှုတ်ဆိတ်သွားရလေတော့
သည်။ ဆားပုလင်းလည်း သူ့ဆေးတံကောက်ကောက်ကြီးကိုမီးခိုးထောင်းထောင်းထအောင်ဖွာရင်း၊ကျွန်ုပ်
လည်း တြွင်းကျေ၊နဝင်းကျေသဘောဖြင့် ဟောလစ်ပုလင်းထဲထည့်ထားသော ပိုလိုစီးကရက်ကို ထုတ်ယူ
မီးညှိရှိုက်ဖွာရင်း ကိုယ်စီစဉ်းစားခန်းဝင်နေကြလေတော့သည်။ ငံပြာရည်ပုလင်းမျှစ်မောင်မှာမူ ဘာမှလုပ်
စရာမရှိ်သည်နှင့် ပါရာအန်စီဗစ်ဆေးတိုက်မှ သိမ်းယူလာသော လူနာမှတ်တမ်းစာအုပ်ကြီးအား ဟိုဒီ လှန်
ငံပြာရည်ပုလင်း။ ။အင်း.......ပါရာအတ်စီဗစ်ဆေးတိုက်က နာမည်နဲ့တော့အတော်လိုက်တာပဲ၊ဘယ်လို
လူနာပဲဖြစ်ဖြစ် ပါရာနဲ့စီဗစ်ပဲပေးသကိုးဗျ...၊ဒါနဲ့တောင် လူနာတွေဒီဆေးခန်းကိုလာနေကြသေးတာအံပါရဲ့
ကျွန်ုပ်။ ။ဒါက ဒီလိုရှိတယ်မောင်ရင်ရဲ့....၊ပါ က ကြာသပတေး ငါး၊ရာ က ဗုဒ္ဓဟူး လေး ဆိုတော့ ပေါင်း
လိုက်ရင် ကိုး မဟုတ်ဘူးလား...၊စီ က အင်္ဂါ သုံး၊ဗစ် က ကြာသာပတေး ငါး၊ပေါင်းလိုက်ရင် ရှစ် ရတယ်...။
ကိုးဂဏန်းဆိုတာ လောကီပညာမှာ အထွဋ်အထိပ်ဂဏန်းကွဲ့....၊ရှစ်ဂဏန်းကတော့ ပါပ ဂဏန်းလို့ခေါ်
တယ်....၊မကောင်းတဲ့လောကီအစီအရင်တွေမှာ မပါမဖြစ်ဂဏန်းပဲ....၊ဒီလို ကောင်းတဲ့ဂဏန်းနဲ့မကောင်း
တဲ့ ဂဏန်း နှစ်မျိုးကို တွဲစပ်သုံးထားတာကိုက ဒီဆေးတိုက်ရဲ့ထူးခြားချက်ပဲ....၊ကြည့်ရသလောက်တော့
ဒီအမှုမှာ အင်မန်အစွမ်းထက်တဲ့ လောကီပညာရှင်တွေ ပါဝင်နေပုံရတယ်...၊အိမ်း..ငါလို နင့်အသက်ငါ့ပေး
ဆရာကြီး နဲ့ တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွယ်....။
ငံပြာရည်ပုလင်း။ ။အင်း....ကြည့်ကြသေးတာပေါ့ဆရာကြီးရယ်...၊ကျွန်တော်တော့ ဂဏန်းဆိုရင် ဂဏန်း
ချဉ်စပ်ဟင်းပဲ သိတယ်ဆရာကြီးရေ.....၊အဲ....အဲ....ဒါနဲ့ အမှုဖြစ်တဲ့နေ့က အဲဒီဆေးတိုက်ကို လာသွားတာ
သုံးယောက်ပဲရှိပါလား....၊အဲဒီသုံးယောက်ကလည်း အမျိုးသမီးတွေချည်းဗျ။ နာမည်တွေကလည်းအဆန်း
ပဲ...၊တစ်ယောက်က မယ်ဒန်ကိုးတဲ့၊တစ်ယောက်ကတော့ မေလမင်း တဲ့...၊နောက်တစ်ယောက်နာမည်က
မိကန်ဒီ ဆိုပဲ....၊ဒီမှာကြည့်ပါဦး ဆရာတို့....၊အဲ့သုံးယောက်စလုံးရဲ့နာမည်တွေဘေးမှာလည်း ကြယ်ပွင့်
ငံပြာရည်ပုလင်း အထက်ပါအတိုင်းပြောရင်း လူနာမှတ်တမ်းစာအုပ်ကြီးအား ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့သို့ထိုးပေး
ဆားပုလင်း။ ။အင်း...ဟုတ်တာပဲ....၊ဒီနာမည်တွေက နာမည်ဝှက်တွေနဲ့တူရဲ့...၊ခက်တာက ဒီမိန်းမတွေ
ကျွန်ုပ်။ ။အိမ်း...ဘာတဲ့....၊မယ်ဒန်ကိုး၊မေလမင်း၊မိကန်ဒီ တဲ့လား....အင်း...ဒီနာမည်တွေကြားတော့
အဖွဲ့က ဖွတ်စဘွတ် ဆိုလား၊ဘာဆိုလားပဲ...။
ငံပြာရည်ပုလင်း။ ။အန်....ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်နာမည်တွေကလည်း အထူးအဆန်းကြီးပါလားဗျာ...။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လမ်းစလေး ပြန်တွေ့တာဟန်ကျတာပဲဗျိုး...၊အဲဒီအငြိမ့်အဖွဲ့က ဘယ်ကတုန်းဗျ...။
ကျွန်ုပ်။ ။ဗျိုင်းရေအိုးစင် ဘက်မှာလို့ ကြော်ငြာထဲ ဖတ်လိုက်မိတယ်...၊
ဆားပုလင်း။ ။ကဲ...ဒါဖြင့် ပြောနေကြာတယ်ဗျာ...၊အဲ့အငြိမ့်အဖွဲ့ဆီသွား စုံစမ်းကြစို့....။
ဤသို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သုံးဦးလည်း အင်းစိန်စီအိုင်ဒီမှ အော်စတင်ကားမဲလေးအား ဖွတ်စဘွတ်အငြိမ့်အဖွဲ့
တည်ရှိရာ ဗျိုင်းရေအိုးစင်ရပ်သို့ မိုင်ကုန်နှင်ခဲ့ကြလေတော့သည်။ဗျိုင်းရေအိုးစင်ရပ်သို့ရောက်ချိန်တွေ
မှောင်စပင်ပျိုးနေပြီဖြစ်သည်။လမ်းတွင်တွေ့သည့် ကလေးတစ်သိုက်အား ဖွတ်စဘွတ်အငြိမ့်၏လိပ်စာအား
မေးမြန်းကြည့်လေရာ အနှီးအငြိမ့်မှာအမှန်တကယ်ရှိကြောင်းနှင့် အတော်အတန်နာမည်ရကြောင်းလည်း
သိရလေတော့သည်။ ကလေးတစ်သိုက်၏နတ်လမ်းညွှန်မှုကြောင့် ဖွတ်စဘွတ်အငြိမ့်တည်ရှိရာအိမ်သို့
ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်သွားလေတော့သည်။ ထိုအိမ်ရှေ့တွင် ဆံပင်စုတ်ဖွား၊ပိုးဟပ်ခြေထောက်မွေး
ကဲ့သို့သော နှုတ်ခမ်းမွှေးတိုနံနံနှင့် လူတစ်ယောက်အား စိတ်ပျက်လက်ပျက်ပုံစံဖြင့် ငုတ်တုတ်လေးထိုင်
ဆားပုလင်း။ ။ဗျိုး....နောင်ကြီး...ဒါ ဖွတ်စဘွတ်အငြိမ့် အိမ် လားဗျ...။
နှုတ်ခမ်းမွှေးနှင့်လူ။ ။ဟုတ်ပါ့ဗျား....၊ကျုပ်ကတော့ ဖွတ်စဘွတ်အငြိမ့်အဖွဲ့ရဲ့ အငြိမ့်ထောင်ဆရာ
ဆားပုလင်း။ ။ကျုပ်တို့က အင်းစိန်စီအိုင်ဒီက ဆားပုလင်းတွေပဲ...၊ခင်းဗျားအငြိမ့်က အငြိမ့်မင်းသမီးတွေ
ကိုနဲနဲပါးပါး မေးစရာရှိလို့ဗျ...။ဘယ်မတုန်း...ခင်ဗျား အငြိမ့်မင်းသမီးတွေ...။
အငြိမ့်ထောင်ဆရာကိုရင်သာပျော့။ ။ကျုပ်လည်း သူတို့ဘယ်မလဲဆိုတာသိချင်နေတာပါပဲဗျာ...။
ဆားပုလင်း။ ။ ဘာ....ဘာပြောတယ်....ဘာဖြစ်လို့တုန်း...၊ခင်ဗျား မင်းသမီးတွေ ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာ
ကိုရင်သာပျော့။ ။ဂနေ့မနက်ကအထိ ဒီအိမ်ထဲမှာ သုံးယောက်လုံးရှိသေးသဗျား...၊ဂနေ့နေ့လည်မှ
ကျုပ်နဲ့ ရန်ဖြစ်ပြီး ဆင်းသွားကြတာဗျ...။
ဆားပုလင်း။ ။ခင်ဗျားနဲ့ဘယ်လိုရန်ဖြစ်ပြီး ဆင်းသွားသတုန်း.....။
ကိုရင်သာပျော့။ ။ဒီလိုဗျ...၊ကျုပ်တို့အငြိမ့်အဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီး မယ်ဒန်ကိုးဆိုတာ ကျုပ်ရဲ့ ချစ်
စွာသော ဇနီးသည်လည်း ဖြစ်သဗျ...၊ပြောရရင်ဗျာ...သူက အငြိမ့်ကရတာ ဝါသနာပါလွန်းလို့ ကျုပ်ကို
ပူဆာတာနဲ့ ဒီအငြိမ့်အဖွဲ့ကို ထောင်ရတာပဲဗျိုး...၊ကျန်တဲ့ လက်ထောက်မင်းသမီးမေလမင်းနဲ့ ရှေ့ထွက်
မင်းသမီးလေး မိကန်ဒီ ဆိုတာကလည်း သူနဲ့ ဝါသနာတူ သူ့သူငယ်ချင်းတွေပဲ...။အဲဒါဗျာ...ဂနေ့မနက်က
ပဲ သူနဲ့ ကျုပ်နဲ့ ၇န်ထဖြစ်ရာကနေ သူရော၊သူ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပါ အိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားကြသဗျာ။
ကျုပ်မယ် ပွဲတွေလက်ခံထားတာရှိနေတာ....၊ခုမင်းသမီးတစ်လက်မှ မရှိ်ပဲ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းတောင်မသိ
ငံပြာရည်ပုလင်း။ ။ခင်ဗျားနဲ့ ခင်ဗျားမိန်းမ ဘာဖြစ်ကြတာတုန်း...။
ကိုရင်သာပျော့။ ။ဖြစ်တာကဒီလိုဗျ...၊သူဒီရက်ပိုင်း နေမကောင်းဘူးလို့ဆိုသဗျ....၊နေမကောင်းလို့
ဆေးခန်းတောင်သွားပြသေးတယ်...၊သူနေမကောင်းဖြစ်ဘီဆိုရင် အဲ့လိုဖြစ်တာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး
ကျုပ်ကို တစ်ခုပြီးတစ်ခုပူဆာနေကြဗျ....၊ကျုပ်လည်း သူ့အလိုလိုက်ပါတယ်ဗျာ....။ခုလည်းနေမကောင်း
ဖြစ်ဘီ ဆိုတာနဲ့ အိုင်ဖုံးဖိုက် ဆိုလားဘာဆိုလား အဲ့သာဂျီးကိုပူဆာတော့တာပဲဗျိုး...၊ကျုပ်မလဲ ခုတလော
ဖဲရှုံးထားလေတော့ လက်ထဲပိုက်ဆံမရှိဘူးရယ်...၊ဖဲရှုံးလို့ ဘူနေရတဲ့အထဲ မိန်းမက မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေ
လာပူဆာလေတော့ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ဘုန်း.....ဘုန်း...ဆိုပြီး နှစ်ချက်လောက်......
ငံပြာရည်ပုလင်း။ ။ ပိတ်ကန်ထည့်လိုက်ရောလား...။
ကိုရင်သာပျော့။ ။စိတ်ထဲကတော့ အဲ့လိုကန်လိုက်ရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားနေတုန်းရှိပါသေးတယ်ဗျာ....၊
ကျုပ်မိန်းမအလွမ်းမင်းသမီးက တစ်ခါတည်း မျက်ရည်တွေရော၊နှပ်တွေရော အတောင့်လိုက်ထွက်ကျပြီး
ငိုတော့တာပဲဗျိုး...၊ကျုပ်လည်း ဒီမိန်းမ ငိုပေ့စေ...ဆိုပြီးပစ်ထားလိုက်မိတာ...တစ်ခါတည်း စိတ်ကောက်ပြီး
ဆားပုလင်း။ ။ခင်ဗျားမိန်းမ ဘယ်ကိုဆင်းသွားသတုန်းဗျ....
ကိုရင်သာပျော့။ ။မပြောတတ်ပါလို့ ငုတ်တုတ်ထိုင်ဘူနေတာသာကြည့်ပါတော့ဗျာ...။
ကျွန်ုပ်။ ။ခင်ဗျားမိန်းမက ဘာနေ့သမီးတုန်းဗျ....
ကျွန်ုပ်။ ။အင်း...ဒီနေ့က ကြာသပတေး ဆိုတော့...ကျိန်းသေပေါက် တော ကိုဆင်းသွားတာဗျ...။
ကိုရင်။ ။ခင်ဗျာ.....တောထဲကို ဟုတ်လား....၊မဖြစ်နိုင်တာဗျာ၊ဒီနုနုနယ်နယ် အငြိမ့်မင်းသမီး သုံးယောက်
ကျွန်ုပ်။ ။ခက်တာပဲဗျာ...၊တောဆိုတာ တောကြီးမျက်မဲကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျ....၊တောဘက်အရပ်ကို
ကိုရင်သာပျော့။ ။အဲ့လိုဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ...၊ကျုပ်မိန်းမရဲ့ ဂျီးဒေါ်တစ်ယောက်က ခရမ်းသုံးခွဘက်ကဗျ၊
လက်စသတ်တော့ သူ့ဘာသာ အလည်ထွက်ချင်တာနဲ့ ကျုပ်ကိုသက်သက်မဲ့ရန်လုပ်သွားတာကိုးဗျ...။
ဆားပုလင်း။ ။ကဲ....ကိုရင်သာပျော့ရေ....ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ပဲ ကျုပ်တို့ကို ခင်ဗျားမိန်းမရှိရာလိုက်ပို့ပေ
တော့....၊ခုလောလောဆယ်တော့ မိုးချုပ်လှပြီ...၊နောက်နေ့မနက်စောစော ကျုပ်တို့လာခေါ်မယ်...၊
ကိုရင်သာပျော့။ ။ကောင်းပါလေ့ဗျာ....၊ကိုယ့်ဘာသာသွားခေါ်ရင် လမ်းစာရိတ်ကုန်နေဦးမယ်...။ခုတော့
ငံပြာရည်ပုလင်း။ ။အောင်မလေးဗျာ....၊နေ့လည်ကမှဆင်းသွားတဲ့မိန်းမကို လွမ်းလှပြီပဲရှိရသေးလား...
လွမ်းရင်လည်း တစ်ညလုံးမအိပ်ပဲထိုင်လွမ်းနေဗျိုး...၊ကျုပ်တို့တော့ ပြန်အိပ်တော့မဗျာ...။
ဤသို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သုံးဦးလည်း စိတ်မောလူမောဖြင့် အိမ်ပြန်လာခဲ့ကြပေတော့သတည်း...။
Posted by ညိမ်းနိုင် at 7/07/2012 18 comments Links to this post
တစ်နာရီ ကီလိုမီတာ ၁၅၀ နှုန်း......
အရှေ့မြောက်အရပ် ၃လက်မအကွာမှာ ဗဟိုပြု.......
ရှေ့ ၁၈လက်မအထိ ဘာမှ မမြင်ရ......
ပေါက် ကွဲ လွင့် စင် ရန် အားယူစပြု.......
ကောင်းကင်မှာတည်တဲ့ မုန်တိုင်း.....ငါ့ရင်မှာ ရိုင်းခဲ့တုန်းကပေါ့.......။
Posted by ညိမ်းနိုင် at 7/02/2012 20 comments Links to this post
နင့်အသက်ငါ့ပေး ဆရာကြီးညိမ်းနိုင် နှင့် ကုမ္မာရီဂိုဏ်း အရှုပ်တော်ပုံကြီး ( အပိုင်း ၁ )
တစ်နေ့သ၌ ကျွန်ုပ်နင့်အသက်ငါ့ပေးဆရာကြီးညိမ်းနိုင် သည် အိမ်တွင်အားယားနေသည်နောက် ပုံမှန်ဝတ္ထု
စာအုပ်ထက်၃ဆမျှထူ၍၂ဆမျှကြီးသော ဟယ်ရီပေါ်တာလက်စွဲ သရဲ၊တစ္စေ၊ဖုတ်၊ပြိတ္တာ၊ကဝေ၊ယက္ခ၊ဘီလူး
အမျိုးမျိုးနှိမ်နှင်းနည်းကျမ်းကြီး အား စိတ်ပါဝင်စားစွာဖတ်ရှုငိုက်မျည်းနေခိုက် ဒေါက်....ဒေါက်...ဒေါက်...ဟူ
သော တံခါးခေါက်သံကိုကြားလိုက်ရသဖြင့် ပြင်းစွာအမျက်ထွက်ရလေတော့သည်....။
ဧည့်သည်။ ။ဆရာကြီး....ကျုပ်တို့ အင်းစိန်စီအိုင်ဒီကပါ...ခဏလောက်တံခါးဖွင့်ပါဦး....
စီအိုင်ဒီကဟူသောအသံကြားလျှင် မြန်မာပြည်ကို ကျွန်ပြုအုပ်စိုးလျှက်ရှိသော ဗျစ်တစ်သျှတို့၏လက်ပါးစေ
များကို များစွာစပ်မျှင်ကပ်သည့်အလျောက်.....ကျွန်ုပ်လည်း အောက်ပါအတိုင်း ဘုတောလိုက်လေ၏
ကျွန်ုပ်။ ။ဟေ့.....ဒီမှာ ညီလေး အကိုတို့နဲ့ခဏလောက်စခန်းကိုလိုက်ခဲ့ပါလို့ ခေါ်မလို့လားကွဟေ...။
ဒီလိုခေါ်ရုံနဲ့ ကြောက်မယ်များထင်နေသလား....ဖွင့်ဘူးကွာ.....ကူလီမျိုးဟေ့ ဒို့ဗမာ အဲ.....သခင်မျိုးဟေ့
စီအိုင်ဒီအရာရှိ။ ။အာ......ဘာတွေပြောနေသတုန်းဆရာကြီးရဲ့...ဆရာကြီးကို ဖမ်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး၊ဆရာ
ကြီးဆီက အကူအညီတောင်းချင်လို့ပါ၊လုပ်စမ်းပါ တံခါးဖွင့်ပါဦး အပြင်မှာ နေပူလွန်းလို့ပါဗျ။
ကျွန်ုပ်။ ။အော်...ဂလိုလား.....အင်း ဒါဆိုတော့လည်းဝင်ခဲ့ကြပေတော့၊နဂိုကကို တံခါးကစေ့ရုံစေ့ထား
ဤသို့ ကျွန်ုပ်လည်း ဝင်ခွင့်ပြုလိုက်လျှင် အင်းစိန်စီအိုင်ဒီမှ အရာရှိဆိုသောလူနှစ်ဦးသည် တံခါးကိုတွန်း
ဖွင့် ဝင်ရောက်လာလေသောဟူလို...။တစ်ဦးကား အသက်၃၀ခန့် တည်တည်တန့်တန့်ပုံစံရှိ၏။တစ်ဦး
ကား အရပ်မြင့်မြင့်၊ဗိုက်ရွဲရွဲ၊မျက်နှာမှာ ကလေးမသာရုပ်နှင့်ဖြစ်၏၊အသက်မှာငယ်သေးဟန်တူသည်။
အသက်၃၀ခန့်အရာရှိ။ ။ကျုပ်ကတော့ အင်းစိန်စီအိုင်ဒီက ဆားပုလင်းအွတ်ထောင်ပါပဲ၊သူကတော့
ကျုပ်လက်ထောက် ငံပြာရည်ပုလင်းမျှစ်မောင် တဲ့...။
ကျွန်ုပ်။ ။အော်...ဆားပုလင်းအွတ်ထောင်နဲ့ ငံပြာရည်ပုလင်းမျှစ်မောင် တို့ကိုး....၊အင်း...ခင်ဗျားတို့နာ
မည်ကိုတော့ သတင်းစာတွေထဲ ဟိုးလေးတကြော်ကြော်ပါနေတော့ သိနေတာကြာပေါ့၊ခုမှလူချင်းသိရပေ
တယ်....။ဒါနဲ့ ဆားပုလင်းကတော့ထားပါတော့ ဟိုတစ်ယောက်က ဘယ်နှာငံပြာရည်ပုလင်းဖြစ်ရသတုန်း။
ငံပြာရည်ပုလင်းမျှစ်မောင်။ ။ဂလိုလေဆရာကြီးရဲ့ ငံပြာရည်ဆိုတော့ ချိုငံလေးပေါ့ဗျာ....၊ချိုငံဆိုတော့
ဟု ငံပြာရည်ပုလင်းမျှစ်မောင်မှ သွားအဖြီးသားနှင့် အောက်ကလိအာသံကိုပြုလျက် ပြန်ဖြေလေ၏။
ကျွန်ုပ်။ ။အိမ်း.....ငိုပြန်ရမှာ ဘယ်သူတွေပါလိမ့်နော်...လူဆိုးတွေလား...ကြွေးရှင်တွေလားတော့
မပြောတတ်...၊ကဲ ရှိစေတော့လေ...၊လာရင်းကိုရှင်းပါဦး စုံထောက်မင်းတို့ရဲ့...။
ဆားပုလင်းအွတ်ထောင်။ ။ပြောရမှတော့ ခက်ရှုပ်ရှုပ်ပဲ ဆရာကြီးရေ....၊ဂလိုဗျ မဂိုလမ်းထဲက ပါရာအန်
စီဗစ် ဆေးတိုက်က ကုလားဆရာဝန်ကြီးမစ္စတာနာရရန်းတစ်ယောက် မနေ့က ဆုံးသွားသဗျ....။
ကျွန်ုပ်။ ။ဟေ့....ကလေးက ကလေးဘာသာနေစမ်း...၊ငါကသေချာအောင် မေးရသကွ...ဟွမ်း...။
ကျွန်ုပ်လည်း ကျွန်ုပ်အား ဝင်ရောက်နှိပ်ကွပ်သော ငံပြာရည်ပုလင်းအား ပြန်နှက်လိုက်လေလျှင် သင်းသည်
ဆားပုလင်း။ ။သူသေသွားတာက ထူးတော့ထူးဆန်းတယ်....၊ဘာဒဏ်ရာမှလည်းမတွေ့ရ၊လူကလည်း
ကျွန်ုပ်။ ။သေမှတော့ အသက်ရှုရပ်မပေါ့ စုံထောက်ရှော်ဂျီးရယ်....၊ကဲထားတော့...အဲ့သာ ကျုပ်နဲ့ဘာ
ဆားပုလင်း။ ။ဘာပတ်သက်သလဲဆိုတော့ သူသေသွားတော့ သူ့လက်ထဲမှာ ဟောဒီအရုပ်လေးကို
ဟုပြောရင်း လူကြီးလက်ညှိးသာသာ အရုပ်ကလေးတစ်ခုအား ကျွန်ုပ်ဘေးရှိစားပွဲပေါ်သို့ ဒေါက်ကနဲ
တင်လိုက်လေသည်။ကျွန်ုပ်လည်း ထိုအရုပ်လေးအား ကောက်ယူကြည့်မိသည်။သစ်သားဖြင့်ထွင်းထုထား
သော မိန်းမကချေသည်အရုပ်လေးဖြစ်သည်၊အရုပ်လေး၏အောက်ခြေတွင်လည်း စကြာပုံနှင့် @ gfb
ကျွန်ုပ်။ ။ဒါ တစ်မျိုးသောဂမ္ဘီရပြင်ညာ နဲ့ စီရင်ထားတဲ့ တစ်စုံတစ်ရာသော အစီအရင်ကွဲ့.....။
ဆာပုလင်း။ ။ဟုတ်မယ်ဆရာကြီး...၊အင်း...ဆရာကြီးကတော့ မြင်တာနဲ့ဒက်ကနဲသိသကိုး၊ဒါကြောင့်
လည်း နင့်အသက်ငါ့ပေးဆရာကြီးညိမ်းနိုင် ရယ်လို့ မြန်ပြည်တစ်လွားဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင်ကြော်ကြားပေး
ဒါကိုးးးးး။ဒါဖြင့် ဒါက ဘယ်လိုဂိုဏ်းက ဘယ်သို့ဘယ်ပုံ၊ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ စီရင်ထားတာလဲဆိုတာ
ကျွန်ုပ်လည်း ဆားပုလင်းကြီးမှ နဲနဲမြှောက်လိုက်လေလျှင် ကြွချင်ချင်ဖြစ်သွားသော စိတ်အား အသာထိန်း
ကျွန်ုပ်။ ။ဒါတော့အတပ်ပြောဖို့ စောသေးသကွယ်....၊အခြားသောသဲလွန်စတွေများ ရသေးလား...။
ဟုအသာဖောရှောလိုက်လျှင် ငံပြာရည်ပုလင်းမျှစ်မောင်မှ ဟွမ်း....ဒါနဲ့များ သူပဲသိသလိုလိုတတ်သလိုလို
နဲ့ အာရွီး....ဟု မကြားတကြားဝင်နှက်လေသော ဟူလို.....။
ဆားပုလင်း။ ။တစ်ခြားတော့ ထွေထွေထူးထူးမတွေ့ရဘူးဆရာကြီး...၊တွေ့လည်း ကျွန်တော်တို့အတွက်
တွေက ပေါသကိုး....သို့ပေမယ့် ဆားပုလင်းကြီးတို့ကို တစ်ဘက်တစ်လမ်းကကူညီရပေမပေါ့...၊ကဲလာ
ငံပြာရည်ပုလင်း။ ။အွန်...ထမင်းဆိုင်ကို ဘာသွားလုပ်မတုန်း....။
ကျွန်ုပ်။ ။ဘာသွားလုပ်ရမတုန်း...ကျုပ် ဘိုင်ပြက်နေလို့ ခုထိနေ့လည်စာမစားရသေး...ခုလိုဒကာပေါ်
ဆားပုလင်း။ ။ဟုတ်ပါပြီလေ...၊မဂိုလမ်းမှာပဲ ဆိတ်သားခပတ် သွားစားကြတာပေါ့လေ....၊ဟိုဝတ္ထုထဲ
မလဲ အဲ့ဟာပဲသွား သွားစားကြမဟုတ်လား.....။
သို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ သုံးဦးသား အာဂပါးစပ်လူဖြစ်ကျိုးနပ်ပဟဲ့ ဟုရေရွတ်လျက် ဆားပုလင်း၏အော်စတင်
ကားမဲလေးနှင့် မဂိုလမ်းသို့ချီတက် ကြလေတော့၏
သို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ သုံးဦးသား မဂိုလမ်းမှ ကုလားကာကာဆိုင်တွင် အင်းစိန်စီအိုင်ဒီမှ ကဒ်ပြားအားအသုံးပြု ချိန်းခြောက်ပြီး ဆိတ်သားခပတ်နှင့် ပလာတာ ဆယ့်နှစ်ပွဲအား အလကား ဗိုက်ကားအောင်စားပြီးလျှင်
အော်စတင်ကားလေးပေါ်၌ ခေတ္တမျှ ထမင်းလုံးစီလိုက်သေး၏။အတန်ငယ်နေမြင့်မှ အခင်းဖြစ်ပွားရာ ပါရာ
ဆေးတိုက်မှာ လူရှင်းလျက်ရှိသည်။ဆေးကောင်တာတွင် အရပ်မြင့်မြင့်၊အသားမဲမဲ၊ရုပ်ခပ်ဆိုးဆိုးလူတစ်
ယောက်သည် ဆရာဝန်ကုတ်အားဝတ်လျက် ထိုင်နေပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကိုမြင်သည်နှင့် ကျွန်ုပ်အား မေးတစ်
ကျွန်ုပ်။ ။ခါးတော့နဲနဲနာနေတယ်ဗျ၊တလောက ကြည့်ကုန်းသိုင်းကျင့်လိုက်တာ.....
ဆရာဝန်။ ။ဒါဖြင့် ပါရာနဲ့စီဗစ် သောက်...၊ဟိုတစ်ယောက်ကရော....
ငံပြာရည်ပုလင်းမျှစ်မောင်။ ။ကျွန်တော်တော့ ခုတလော ဝမ်းပျက်နေတယ်....
ဆရာဝန်။ ။အင်း ပါရာနဲ့စီဗစ် သောက်လေ....ပျောက်မှာပါ။ပြောနောက်တစ်ယောက်...
ဆားပုလင်း။ ။ပါရာနဲ့ စီဗစ် သောက်ချင်လို့...ဟာ....ရှုပ်ကုန်ဘီ...၊ဒီမှာ ကျုပ်တို့က အင်းစိန်စီအိုင်ဒီ က
ဗျ၊မစ္စတာနာရရန်းအမှုအတွက်လာတာ...၊ဘယ်နှာလူမြင်တာနဲ့ ဘာဖြစ်သတုန်း လို့ဆီးမေးရသတုန်း...။
ကျွန်ုပ်။ ။သိဘူးလေ...၊ဆြာဝန်ကမေးတော့ ကျုပ်တို့ဖြေရသပေါ့လေ....၊အကျင့်ကပါနေသကိုး.....။
ဆရာဝန်။ ။အိမ်း..ကျုပ်လည်း လူမြင်ရင် လူနာထင်နေသကိုး...။စိတ်မရှိပါနဲ့လေ...၊ကျုပ်နာမည်က
ကျွန်ုပ်။ ။အန်...ဒေါက်တာနာမည်ကလည်းဗျာ....၊ကျုပ်ကတော့ နင့်အသက်ငါ့ပေးဆရာကြီးညိမ်းနိုင်ပါ။
ဒေါက်တာတိုတိုလပ်။ ။အော်....နင့်အသက်ငါ့ပေးဆိုတော့ ခင်ဗျားလည်းဆရာဝန်ပဲလား...ကြည့်ရတာ
ကျွန်ုပ်။ ။မဟုတ်တာ....ကျုပ်က မြန်မာဂမ္ဘီရလျှို့ဝှက်ဆန်းကျယ်နက္ခတ္တဗေဒသုတစွယ်စုံ မဂ္ဂဇင်း
ဟုတ်ပေါင်ရှုပ်ကုန်ပါဘီ...၊ကျုပ်က မြန်မာဂမ္ဘီရလျှို့ဝှက်ပညာတွေကို အထူးတလည်လိုက်စားကျင့်ကြံအား
ထုတ်ပေါက်မြောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ ဆရာကြီးတစ်ဆူပဲဗျ။ဒီစီအိုင်ဒီကဆရာတွေက အကူအညီတောင်းလို့လိုက်
ဒေါက်တာ။ ။အော်...မသိလို့ပါဆရာကြီးရယ်....၊ဒါဖြင့် ဒီကနှစ်ယောက်က စီအိုင်ဒီကပေါ့ ဟတ်လား။
ငံပြာရည်ပုလင်း။ ။ဟုတ်ပါတယ်...၊ကျွန်တော်က ငံပြာရည်ပုလင်းမျှစ်မောင်ပါ။သူက ဆားပုလင်းအွတ်
ထောင်တဲ့....၊မနေ့ကတော့ဖြင့် ခင်ဗျားကိုဆေးတိုက်မှာမတွေ့ရပါလား၊ဒါနဲ့ နေပါဦး ခင်ဗျားက လူနာ
ဒေါက်တာ။ ။ဟုတ်တယ်လေ..မနေ့က နာရရန်းရဲ့ဂျူတီဗျ၊ကျုပ်ဂျူတီမဟုတ်တော့ ကျုပ်လည်း ဂျင်
ဝိုင်းသွားနေသပေါ့...အဲလေ... လေ့ကျင့်ခန်းသွားလုပ်နေသပေါ့။ ပါရာနဲ့စီဗစ်ပဲ ပေးတာကတော့ဗျာ...
မောင်ရင်ပဲ ကျုပ်တို့ဆေးတိုက်နာမည်ကိုသာ ကြည့်ပေတော့...၊ပြောမယ့်သာပြောရ အဲ့ဆေးအတွဲအစပ်
နဲ့ ကျုပ်နဲ့က အကျိုးပေးသဗျ..၊ဒါကြောင့် ကျုပ်က ကိုးဆယ်ရှစ်ပါးပျောက်ဆေးတွဲ လို့တောင်နာမည်ပေး
ဆားပုလင်း။ ။ကဲ...ကဲ.....တော်ကြပါတော့....၊ပေါက်ကရတွေ....၊ကဲ ဒေါက်တာ...ကျုပ်တို့အထဲဝင်
စစ်ဆေးလိုက်ဦးမယ်...၊ဆရာကြီး....အမှုဖြစ်တာက အတွင်းဘက် လူနာကြည့်တဲ့အခန်းထဲမှာပဲဗျ....။
ဤသို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ သုံးဦးသား အတွင်းခန်းသို့ဝင်ရောက်သည်ရှိသော် ဒေါက်တာတိုတိုလပ်လည်း
မယောင်မလည်နှင့် လိုက်ပါဝင်ရောက်လာလေသည်။လူနာကြည့်ခန်းကား သာမန်မျှပင်ဖြစ်ပြီး၊ကုတင်တစ်
တစ်ချောင်းနှင့် ပန်းအိုးတစ်လုံးရှိပြီးလျှင်၊ ပန်းအိုးထဲတွင် ပန်းတစ်ပွင့်ထိုးထားသည်။ကျွန်ုပ်လည်း ထိုပန်းကို
မြင်လျှင် အထူးပင်အံသြသွားရပြီး ကျွန်ုပ်၏မျက်လုံးအစုံသည် ထိုပန်းကိုမြင်သည်နှင့် စူးရှတောက်ပြောင်
ကျွန်ုပ်။ ။ဒီမှာ စုံထောက်ကြီး...ခင်ဗျားဒီပန်းကို မနေ့ကတည်းကတွေ့သလား၊ခုမှထိုးထားတာလား...။
ကျွန်ုပ်။ ။အိမ်း....ကျုပ်လည်း ရုပ်တုလေးကိုမြင်ကတည်းက ရိပ်မိပြီးသားပါ။ခု ဒီပန်းကိုတွေ့တော့ ပိုသေ
ချာသွားသပေါ့ဗျာ...၊ဒီပန်းကို ဘယ်သူ ထိုးထားသတုန်း....ဒေါက်တာ....။
ကိုအမြဲလဲလှယ်တာကတော့ ကျုပ်တို့ဆေးတိုက်က နာ့စ်မလေး မိုးငွပ်ပဲဗျ....၊သူပဲနေမယ်.....။
ဒေါက်တာ။ ။ဒီနေ့သူခွင့်ယူသဗျ၊မနေ့က မစ္စတာနာရရန်းဆုံးသွားတာကို စိတ်မကောင်းလွန်းလို့ ဒီနေ့
ကျွန်ုပ်။ ။ဒါဖြင့်် သူ့ဘယ်မှာနေသတုန်း...၊သူ့လ်ိပ်စာသိလား...။
ဒေါက်တာ။ ။ကျုပ်သေချာတော့မသိဘူး၊မြေနီကုန်းဘက်နေသလိုလိုပြောတာပဲ၊သူ့ကို နာရရန်းခန့်ထား
ငံပြာရည်ပုလင်းမျှစ်မောင်။ ။အွန်.....ခင်ဗျားပြောမှပဲ သေသူကိုသွားမေးရမလိုဖြစ်နေပြီ။
ဆားပုလင်းအွတ်ထောင်။ ။နေဦးဗျ၊ကျုပ် မနေ့က နာရရန်းရဲ့ မှတ်စုစာအုပ်လေး သိမ်းထားတာရှိတယ်၊
ကျွန်ုပ်။ ။ဟုတ်ဘီလေ...၊မြန်မြန်ရှာဗျို့....၊သူ့ကိုမိရင် ဒီအမှုကတစ်ဝက်လောက်ပြီးပြီဗျ.....။
ဆားပုလင်း။ ။ဒါဖြင့် ကျုပ်တို့ အင်းစိန်စီအိုင်ဒီရုံးလို အမြန်လစ်စို့ဗျိုး.....၊ကျုပ်ရုံးခန်းထဲမှာ အဲ့မှတ်စု
ကျွန်ုပ်။ ။အင်...အတော်စေ့စပ်သေချာတဲ့ ဆားပုလင်းပေပဲ...၊ကဲ..ဒါဖြင့် ဒီ လူနာမှတ်တမ်းပါသိမ်းခဲ့ဗျာ၊
ဒေါက်တာတိုတိုလပ်။ ။အမ်....ခင်ဗျားတို့ ဒီစာအုပ်ကိုသိမ်းတော့ ကျုပ်က လူနာလာရင် ဘယ်လိုရေးရ
ငံပြာရည်ပုလင်း။ ။အိုဗျာ....ခင်ဗျားမှာမယ်မယ်ရရရေးစရာဘာရှိတုန်း....၊လူနာနာမည်ပဲ စာရွက်လွတ်
တစ်ခုမှာရေးထားလိုက်...၊ပေးမယ့်ဆေးက ပါရာနဲ့စီဗစ် ပဲမဟုတ်လား...၊ထွေထွေထူးထူုးရေးစရာမလိုပါ
ဤသို့ ငံပြာရည်ပုလင်းမျှစ်မောင်မှ ဝင်နှက်လေသောအခါ ဒေါက်တာကြီးလည်းငြိမ်ကျသွားလေတော့
သည်။ကျွန်ုပ်တို့လည်း အော်စတင်ကားမဲလေးအား မိုင်ကုန်နှင်လျက် အင်းစိန်စီအိုင်ဒီရုံးကြီးဆီသို့ အမြန်
ကျွန်ုပ်တို့ သုံးဦးသား အင်းစိန်စီအိုင်ဒီ ရုံးတွင်းသို့ကပြာကယာဝင်ရောက်လာသောအခါ ရုံးအပေါက်ဝ
တွင် စောင့်နေသော ပြာတာကောင်လေးမှ ဆီးပြီးလျှင်....
" ဟော...ဆရာတို့ပြန်လာပလား...ရော့...ရော့....၊ဒီကဧည့်သည်လည်း တစ်ထုပ်ယူ...." ဟုဆိုပြီးလျှင်
ကျွန်တော်တို့လက်တွင်းသို့ အထုပ်လေးတစ်ထုပ်စီထည့်ပေးလေ၏။ကျွန်ုပ်လည်း အထုပ်လေးကိုဖွင့်
ကျွန်ုပ်။ ။ဘာလုပ်ဖို့တုန်း လက်ဘက်ခြောက်က...
ပြာတာလေး။ ။ဟိုမှာ မင်းကြီး ဆူနေပြီလေ....၊ဒါကြောင့် လက်ဘက်ခြောက်ထုပ်ပေးတာ....
ဆားပုလင်း။ ။ဟယ်...ဒီကောင်...လူကြီးတွေကိုနောက်တီးနောက်တောက်နဲ့...၊ဒါနဲ့မင်းကြီးက ဘာ
ပြာတာလေး။ ။ဒီလိုဆရာရဲ့.....အခုလေး တင်ပဲ ရုံးကို ကောင်မချောချောလေးတစ်ယောက်လာပြီးလိမ်
သွားလို့လေ....၊မင်းကြီးပြန်လာလို့သိတော့ စီအိုင်ဒီကို ဝင်လိမ်သွားရအောင် ရှိတဲ့လူတွေ နုံရ၊အရသလား
ပြာတာလေးစကားဆုံးသော် ကျွန်ုပ်တို့လည်း တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်ပြီး အံသြမိရ၏။
ဆားပုလင်း။ ။ကဲလာဗျာ....ဆရာကြီးကိုလည်း မင်းကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရင်း၊အကျိုးအကြောင်းလည်း
သို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ သုံးဦးသား ကုပ်ချောင်းချောင်းနှင့် မင်းကြီးရုံးခန်းထဲ ဝင်လာကြလေတော့သည်။
မင်းကြီးကား....သူ၏နှုတ်ခမ်းမွေးကြီးထောင်နေအောင် ဒေါသထွက်နေပြီးသကာလ တံတွေးများတွင်တွင်
ထွက်စေလျက် ဒမ်....၊ရှစ်....၊ကိုး....၊ဘူ....၊နောက်ချေး....၊အစရှိသော ဘိလပ်အဆဲများဖြင့် သူ့ရှေ့တွင်
တန်းစီရပ်နေသော စုံထောက်များကို ဆဲဆိုနေလေတော့သည်။
ကျွန်ုပ်လည်း ဤသို့ ဘိလပ်သားတစ်ဦးမှ မြန်မာလူမျိုးများကိုဆဲနေသည်ကိုမြင်သော် အမျိုးသားရေး
စိတ်ဓာတ်များ ချောင်းချောင်းထလျက် အနီးမှ ငံပြာရည်ပုလင်းမျှစ်မောင်အား " ဟကောင်ရ.....
ဘိလပ်သားတစ်ဦးက ဒို့မြန်မာတွေကိုဆဲဆိုနေတာကောင်းသလား....သွား ပြန်တုတ်ထည့်လိုက်စမ်း..."
ဟု ပါးစပ်ကလည်းမြှောက်ပေး...၊လက်ကလည်း သူ့ခါးအားကိုင်၍ ရှေ့သို့တွန်းထည့်လိုက်သည်ရှိသော်...
ငံပြာရည်ပုလင်းမျှစ်မောင်မှာ မင်းကြီးရှေ့သို့ ငိုက်စိုက် ငိုက်စိုက်ရောက်သွားပြီးလျှင်..........
" ဟဲ့ ငမြွေတိုး....၊ဖိုးလမေသား....၊အရိုးကိုက်ကောင်....၊ဖေတရာ...မောင်တစ်ကျိတ်...ဦးလေးအစိတ်သား
ဟူ၍ အယုတ္တအနတ္တများတစ်သီကြီးများဖြင့် မင်းကြီးအားဆဲဆိုလေတော့သည်။မင်းကြီးနှင့် တစ်ကွ
အားလုံးသော စုံထောက်များမှာ ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြင့် သူ့အားဝိုင်းကြည့်နေကြလေတော့သည်။
၁၀မိနစ်ခန့် ဆဲဆိုပြီးသောမှ ရပ်သွားလေတော့သည်။
မင်းကြီး။ ။မောင်မင်း မျှစ်....ကျွန်ုပ်အား ဘာပြောသနည်း...မောင်မင်းပြောစကားများအား ကျွန်ုပ်နား
ငံပြာရည်ပုလင်း။ ။အဲ.....ဟို....ဟိုသင်း....ဘာမှဟုတ်ပါဘူး မင်းကြီး....။
ငံပြာရည်ပုလင်းမျှစ်မောင်လည်း အူတီးအူကြောင်နဲ့ လျောချလိုက်လေလျှင်၊အတို့အထောင်လုပ်ချင်သော
" အဲ့ဒါ သူ မင်းကြီး ကို မြန်မာလို ဆဲနေတာဗျ...."
မင်းကြီး။ ။အော်....ကျွန်ုပ် ဆဲတာကိုမကျေနပ်လို့ ပြန်ဆဲတာပေါ့လေ...ကောင်းဒယ်...ကောင်ဒယ်...၊
မောင်မင်း ခုလိုမခံချင်စိတ်ရှိတာ ကောင်းဒယ်....၊ဟို ကောင်ဒွေ...ဒီ ကောင်လေးကို နမူနာယူကြ...။
ဟု မင်းကြီးကဆိုလိုက်လေသော် အတို့အထောင်စုံထောက်လည်း ဇတ်ပုသွားရသောဟူလို....။
ဆားပုလင်းအွတ်ထောင်။ ။ဟ...ငါ့ကောင်ရ...ဒီတစ်ခါ မင်းသတ္တိပြောင်လှချည်လား...၊မင်းကြီးကိုဆဲတာ
ငံပြာရည်ပုလင်းမျှစ်မောင်။ ။ဘယ်ကသာ ဆရာသမားရယ်...၊ကျုပ်က ခါးလာတို့ရင် ယောင်တတ်တဲ့
အကျင့်ရှိသဗျ...၊အဲ့ဒါကို ဒီဆရာကြီးက ကျုပ်ကို ခါးကကိုင်ပြီးတွန်းလိုက်တော့ ကျုပ်လည်း ယောင်ပြီး ဆဲ
ဤသို့ ငံပြာရည်ပုလင်းမှ ရှင်းပြလိုက်သည်ရှိသော် ကျွန်ုပ်တို့လည်း ငိုအားထက်ရီအားသန်ဆိုသလို
ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ ငံပြာရည် ရယ်.....ဟုသာရေရွတ်လိုက်နိုင်လေတော့သတည်း....။
( ချစ်ခင်ရသော ကျွန်တော့်ဘလောဂါအကို၊အမ၊ညီ၊ညီမ၊တူမ များအား ဤပို့စ်တွင် ဇာတ်ကောင်များ
အဖြစ် သရုပ်ဖော်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း နှင့် မည်သူ့ ဂုဏ်၊သိက္ခာ၊အတ္တ၊မာန၊ပညာ၊ညဏ်၊အသက်၊ရုပ်
ရည်(ဘာကျန်သေးပါလိမ့်...:))) ကိုမျှ ထိခိုက်၊နစ်နာ၊သရော်၊စော်ကား၊နှိမ့်ချ၊ထိပါး၊ပြစ်မှား(ဟူး...:))
လိုစိတ် ဆံတစ်ချည်မျှ မရှိပါကြောင်း၊ အပျော်သက်သက်မျှသာဖြစ်ကြောင်း တောင်းပန် အသိပေးအပ်
ပါသည် ရဲဘော်တို့......၊အပိုင်း ၂ တွင်လူပိုစုံလာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း......:))))
Posted by ညိမ်းနိုင် at 7/02/2012 22 comments Links to this post
Labels: ဝတ္ထုရှည်, ဟာသ, ပေါက်ကရတွေ
နင့်အသက်ငါ့ပေးဆရာကြီးညိမ်းနိုင် နှင့် ကုမ္မာရီဂိုဏ်...
ကျောင်းဒါယကာ ကျောင်းဒါယကာမအဖြစ် ခံယူပွဲ ( သို့မဟုတ...
နင့်အသက်ငါ့ပေးဆရာကြီးညိမ်းနိုင် နှင့် ကုမ္မာရီဂိုဏ်...
နင့်အသက်ငါ့ပေး ဆရာကြီးညိမ်းနိုင် နှင့် ကုမ္မာရီဂိုဏ...